ဆောင်းပါး – Susan's Wedding Guide (Myanmar) – Wedding Directory and Magazine of Myanmar
ဧပြီ 2, 2020 နေ့တွင်
သင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲက အားလုံးစီစဉ်ပြီးနေပြီ ဒါပေမယ့် COVID-19 ကြောင့် သင့်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းရမှာ (သို့မဟုတ်) cancel လုပ်ရမှာတွေဟာ ယခုလက်ရှိမင်္ဂလာဆောင်မယ့် စုံတွဲတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ရွှေ့ရမယ်၊ cancel လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တောင် စိတ်ဓာတ်ကျမနေဖို့နဲ့ သေသေချာချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီပြသနာဟာ စုံတွဲတွေအတွက် တော်တော်လေးခေါင်းခဲစရာဖြစ်တာကြောင့် ဒီအခြေအနေကို ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အပေါ် အကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) မင်္ဂလာပွဲကို ရွှေ့သင့်လား (သို့မဟုတ်) ဖျက်လိုက်သင့်လား??
သင်စီစဉ်ထားသလို သင့်မင်္ဂလာပွဲက ရှေ့ဆက်သွားလို့ မရတော့တာကြောင့် မင်္ဂလာပွဲကို ရွှေ့မလား (သို့) ဖျက်သိမ်းမလားဆိုတဲ့အပေါ် စုံတွဲတွေအတွက် စဉ်းစားဖို့ လိုလာပါပြီ။ မင်္ဂလာပွဲကို ဘယ်သူပဲထောက်ပံ့ပေးထားထား မင်္ဂလာပွဲအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ စုံတွဲတွေကြားပဲပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရက်ရွှေ့မယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးသားတိုင်ပင်ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ရက်မြတ်မင်္ဂလာအတွက် လူကြီးသူမတွေကို နှစ်ဦးသားတိုင်ပင်ပြီးမေးလို့ရသလို ဗေဒင်မေး၍လည်း ရက်မြတ်မင်္ဂလာ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
(၂) မင်္ဂလာပွဲလာဖို့်ဖိတ်ထားတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဆက်သွယ်တဲ့အခါ….
သင့်မင်္ဂလာပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မြန်လေး အကြောင်းကြားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ရက်တိတိကျကျမထွက်သေးပေမယ့် သင်မျှော်မှန်းထားတဲ့ရက်ကို ဧည့်သည်တွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင် ပြောပြထားနိုင်ပါတယ်။
(၃) ဘယ်သူ့ကို အရင်ဆုံးစပြီး ဆက်သွယ်မလဲ?
သင်က မင်္ဂလာပွဲကို Planner နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်စီစဉ်နေတာဆိုရင် သင့်မိသားစု၊ သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့ အရင်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ တခြားဘယ်သူနဲ့မှမဆက်သွယ်ခင် သင့်စိတ်ထဲရှိတာကို ဖွင့်ဟတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဒါပြီးရင် သင့်ပွဲအတွက် ခန်းမနဲ့ အကျွေးမွေးတာဝန်ယူရသူတွေကို ပြောပြတိုင်ပင်ပါ။ သူတို့ဆီမှလည်း အကြံကောင်းရလာနိုင်ပါတယ်။ သင့်မင်္ဂလာပွဲကို ဖျက်သိမ်းခြင်း မပြုလုပ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
(၄) Suppliers များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း
သင့်မင်္ဂလာပွဲရက်ကို ရွှေ့လိုကြောင်းနဲ့ ဖျက်သိမ်းလိုကြောင်း သင့် suppliers တွေကို ပြောပြဖို့အတွက် Email ပို့ပြီးပြောဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ပြောထားတဲ့ စကားတွေကို ပြန်မှတ်မိအောင် ကြိုးစားနေရတာထက် Email နဲ့ ပို့ထားတဲ့ စာသားတွေကို ပြန်ရှာပြီး ရည်ညွှန်းတာက ပိုလွယ်ကူတာမို့လို့ပါ။ သင့်မင်္ဂလာပွဲကလည်း နီးလာပြီ၊ သင်လည်းဖုန်းခေါ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် တခြားတစ်ဖက်ကလည်း အခုအချိန်မှာ မင်္ဂလာပွဲတွေ အများကြီးကို စီစဉ်ပေးနေရတာကြောင့် ပုံမှန်ထက် နည်းနည်းတော့ ပိုစောင့်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Photographer နဲ့ Make-up Artist က တခြားလက်ခံထားတဲ့ ပွဲတွေနဲ့ တိုက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ဆွေးနွေးပါ။ သူတို့လည်း သင့်မင်္ဂလာပွဲအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) နှစ်လည်ပိုင်း မင်္ဂလာဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား မင်္ဂလာဆောင်များ
ယခုလက်ရှိ နယ်စပ်နဲ့ ခရီးသွားလာခွင့်တွေ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့် သင့်မင်္ဂလာပွဲကို ရွှေ့လိုက်တာက ပိုကောင်းပြီး ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ (သို့) ဒီနှစ်သင့်ရဲ့ မင်္ဂလာနေ့ရက်ကို နောင်နှစ်အဲ့နေ့ရက်ကိုပဲ ကျင်းပဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလည်း ကောင်းပါတယ်။
သင်လည်း သင့်ရဲ့ မင်္ဂလာနေ့ရက်အတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်တာကြောင့် Plan B အနေနဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အခြေအနေ မတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့် နောက်ထပ်အစီအစဉ်ထပ်ပြောင်းတာက ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ အရင်က သင်ရည်မှန်းထားတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း ခံစားရနိုင်တာကြောင့် ဒီအချိန်မှာ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စောင့်နေပေးဖို့ လိုပါတယ်။
သင်က မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လက်ရှိမှာ အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ သင်က wedding planner ဆိုရင် suppliers တွေအားလုံးနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေဖို့နဲ့ လုပ်ရမယ့်အရာတွေ အားလုံးကို စာရင်းလုပ်ထားဖို့လည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။
(၈) ဒေါသထွက်လွယ်သော customer များနှင့် ဆက်ဆံခြင်း
အကယ်၍ သင်က planner (သို့) supplier ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးအချက်က စုံတွဲနဲ့ သင်တို့ကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မှုရှိနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မရေရာမသေချာမှုကြောင့် ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့၊ စိတ်ဆက်လွယ်တဲ့ customers တွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါ wedding planner နဲ့ suppliers တွေရဲ့စကားပြောချိုသာမှုက စိတ်ကို ပြေလျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။
သင့်မင်္ဂလာပွဲကို ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတာဟာ သင့်အတွက် တော်တော်ခဲယဉ်းခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာ email နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Email နဲ့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးတာဟာ ထိရောက်မှုရှိပြီး သင့်ရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ Email အသုံးမပြုတဲ့သူတွေအတွက် စာပို့ပေးတာ၊ ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့လည်း အကြောင်းကြားပေးနိုင်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိမှာ ဘယ်အရာမှ မသေချာသေးတဲ့အတွက် ၂၀၂၁ ပွင့်လင်းရာသီမှာ လက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့အတွက် သင့်အမြင်ကရော ဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မလဲ?? စုံတွဲတွေကို စိတ်မလောဖို့၊ စောင့်နေဖို့၊ နားစွင့်နေဖို့နဲ့ ဘယ်အရာကိုမှ ငွေပေးချေမထားသေးဖို့ကို ပြောချင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲတွေအများကြီး စုပုံနေတဲ့အတွက်ရော၊ သင်ရွှေ့ပြောင်းမယ့်ရက် အဆင်ပြေ၊ မပြေစဉ်းစားဖို့အတွက်ရော လအနည်းငယ်လောက် အချိန်ယူဖို့လိုပါတယ်။
(၁၁) နစ်နာမှုရှိသွားတဲ့ စုံတွဲများအတွက်
မင်္ဂလာပွဲရွှေ့လိုက်ရတာ သတို့သမီးတော်တော်များများအတွက် စိတ်ထိခိုက်နေမယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရွှေ့လိုက်ရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက်လည်း စိတ်နှစ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ သို့မှသာ ယခင်က သင်မှန်းထား၊ စီစဉ်ထားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ထူးထူးခြားခြားလေးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အရင်နဲ့ မတူတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုတောင်မှ ဒီအချိန်မှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ယခု သင်အသစ်ထပ်စီစဉ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်ကိုတောင် ပိုနှစ်သက်မိသွားလိမ့်မယ်လို့ သင်လုံးဝထင်ခဲ့မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ဘဝအတွက် လုံးဝမမေ့နိုင်မယ့် သင့်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲ လုံးဝဖြစ်မြောက်ရမယ်လို့ သင်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ထိ တထစ်ချ မှတ်ယူထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။
မကြာခင်မှာပဲ ပွဲနေ့ကြီးကို ရင်ဆိုင်ကြရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ သတို့သားလောင်းတွေအတွက် အကြံလေး ပေးချင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင် မတိုင်ခင်ရက်တွေမှာ သတို့သမီးကိုပဲ သင်ကိုယ်တိုင်ကသာမက အားလုံးကပါ အာရုံစိုက်နေတာကို သင်ခံစားမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲက သင်ကိုယ်တိုင် အဓိကနေရာက ပါဝင်ရမယ့် ပွဲလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်လည်း အကောင်းဆုံးတွေ ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့ သတို့သားတွေ ဆီကနေ လေ့လာပြီး ဘာတွေ လိုအပ်တယ်၊ ဘာတွေ သိထားသင့်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
(၁) ကိုယ့်အတွက် အချိန်ပေးပါ
သတို့သားတစ်ဦးကတော့ အကြံပေးပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲမစမီမှာ ကိုယ့်အတွက် အချိန်တစ်ခု ရှိပါစေတဲ့။
စိတ်ရှုပ်စရာအတွေးတွေ ရှိနေရင် အဝေးကို ပို့ပါ။ မကြာမီကျင်းပတော့မယ့် ပွဲမှာ သင်ဟာ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ အတူ ရှိနေမှာပါ။ ပြန်မရနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကို အမိအရမှတ်တမ်းတင်တဲ့ အခါတိုင်းမှာ သင် ပြုံးနေဖို့လိုပါတယ်။ စောစောထရမယ်ဆိုရင်တောင် စောစောထပြီး အချိန်ယူပါ မကြာခင်မှာ သင်ဟာ ခင်ပွန်းကောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် ရောက်တော့မယ.်ဆိုတာကို သတိရပါ လို့အကြံပေးထားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အပြုံးက နေရာတိုင်းမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ သတို့သားတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ အပြုံးက ရက်ရက်ရောရောကြီးကို ပေးရမယ့်အရာပါ။ ဓါတ်ပုံရိုက်လည်း ပြုံးရမယ်၊ ဧည့်သည်တွေ အတွက် လည်း ပြုံးရမယ်၊ ပြုံးရလွန်းလို့ ညောင်းတဲ့အထိ ပြုံးရမှာပါ။ ပြုံးတတ်အောင်လည်း အခုကတည်းက လေ့ကျင့် ထားပါ။ ကိုယ့်ပွဲမှာ ကိုယ်က တည်တည်ကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူးနော်။
(၃) အစားစားဖို့ မမေ့ပါနဲ့
ပွဲနေ့မှာသင်က ဟိုပြေးသည်ပြေးနဲ့ အလုပ်များကောင်းများနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုစားပြီး ဗိုက်ဖြည့်ထားဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ပွဲအချိန်အတွင်းမှာ ဗိုက်ဆာတာရယ် ၊ ဧည့်သည်တွေကို ဧည့်ခံ၇တာရယ်က သင့်ကို စိတ်ကျဉ်းကြပ်စရာဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပွဲမတိုင်မီ အစားစားဖို့ သတိပေးနေမယ့် သူတစ်ယောက်လောက် သင့်အနားမှာ ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။
သင်တို့နှစ်ဦး လပေါင်းများစွာ စီစဉ်ထားတဲ့ အရာတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ကိုယ် စီစဉ်ထားတဲ့ အစီအစဉ် အတိုင်းသာဆက်လိုက်သွားပါ။ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ကပ်ပြီး စီစဉ်လိုက်တဲ့ အရာတွေက များသောအားဖြင့် မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ အစီအစဉ်တကျ မဖြစ်လာတဲ့အခါ စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ရပါမယ်။ ပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့။ ဒါ့ကြောင်း ပွဲချိန်နားကပ်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မပြင်ပါနဲ့။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ အနားယူပါ။ ပွဲရက်မတိုင်ခင် ညမှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့လိုပါတယ်။ မနက်ဖြန်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားတာတွေ ခဏမေ့ပြီး သက်တောင့်သက်သာအိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဒါမှသာ မနက်ဖြန် သင့်ပွဲမှာ သင်ဟာ အားအင်အပြည့်နဲ့ အကောင်းဆုံး ဆင်နွှဲနိုင်မှာပါ။
ဒီအခြေခံအချက်လေးတွေက သင်ရဲ့ ပွဲနေ့မှာ အကျိုးရှိစေလိမ့်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဇူလိုင် 22, 2019 နေ့တွင်
မင်္ဂလာသတို့သားသတို့သမီးတို့အတွက် မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုစီစဉ်ဖို့ရာ အဓိက အကျဆုံးက မင်္ဂလာရက်မြတ်သတ်မှတ်ခြင်းပါ။ ဒီလို မင်္ဂလာရက်ကို သိရှိပြီးနောက် အခြားအရာတွေ မစီစဉ်ခင်မှာ ဒုတိယ အလုပ်သင့်ဆုံးကတော့ မင်္ဂလာနေရာ ရွေးချယ်ခြင်းပါပဲ။ မိမိကျင်းပလိုသော မင်္ဂလာရက်မြတ်အတွက် မင်္ဂလာခန်းမ ရဖို့က အဓိက ကျလာပါပြီ။ မိမိအသိုင်းဝိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ခန်းမဖြစ်ရမယ်၊ ဧည့်ခံပွဲလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာသွားလာနိုင်တဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ရပါမယ်။ မင်္ဂလာဧည့်ခန်းမနေရာရွေးချယ်ရာမှာ သင့်တင့်မျှတသော နှုန်းထားပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုကောင်းများနှင့် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသော မင်္ဂလာခန်းမလေး နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Central Hotel ဆိုရင် တော်တော်များများသိနှင့်ကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ Central Hotel Yangon မှာ မင်္ဂလာပွဲပေါင်းထောင်ချီ ကျင်းပခဲ့ရာနေရာလေးဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာခန်းမလေးအကြောင်း ထပ်ပြီး မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့လည် ရဲ့ အချက်အချာကျသွားလာရေး အဆင်ပြေသောနေရာတွင် တည်ရှိနေတာကြောင့် မင်္ဂလာပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ်များအတွက် အလွန်လွယ်ကူအဆင်ပြေလှပါတယ်။ ဒီခန်းမမှာ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေ ရမလဲဆိုတာ ဆက်ပြီး ပြောပြပေးပါမယ်။ ခန်းမ မှာ ဧည့်သည်ဦးရေ ၅၀၀ တစ်ပြိိုင်တည်း ဧည့်ခံကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲအချိန် အနေနဲ့ကတော့ တစ်နာရီခွဲ အချိန် ရပြီး တနေ့ကို မင်္ဂလာပွဲ (၄) ပွဲ လက်ခံကျင်းပပေးနေတာဖြစ်တာကြောင့် မိမိ နှစ်သက်ရာ အချိန်ကို ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာဧည့်ပရိသတ်တွေအတွက် ဧည့်ခံကျွေးမွေးနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေ အနေနဲ့ကတော့ Snack (၅)မျိုး၊ ကော်ဖီ ၊ ရေခဲမုန့်) ၊ Snack Menu A-E ရွေးချယ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပြီး တစ်ဦးလျှင် ၆ဝဝဝကျပ်နှုန်း၊ ကြက်သား (ထောပတ်ထမင်း/ဒံပေါက်) နှင့် ရေခဲမုန့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံလိုပါကတစ်ဦးလျှင် ၇၅ဝဝကျပ်။ ဆိတ်သား (ထောပတ်ထမင်း/ဒံပေါက်) နှင့် ရေခဲမုန့် အပါအဝင် တစ်ဦးလျှင် ၈၅၀၀ ကျပ် နှုန်းသာရှိသဖြင့် အရသာကောင်းမွန်သော စားသောက်ဖွယ်လျာများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ကျွေးမွေး ဧည့်ခံ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် ဟိုတယ်မှ တပွင့်ထိုး ပန်းအိုးများကို မေတ္တာလက်ဆောင်စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ဧည့်ပရိတ်သတ်ဦးရေ ၂၀၀ နှင့် အထက်မှာယူပါက မင်္ဂလာကိတ် (Wedding Cake) လက်ဖွဲ့ပေးခြင်း၊ ဧည့်ပရိတ်သတ်ဦးရေ ၃၅၀ နှင့် အထက် မှာယူ ဧည့်ခံပါက ဟိုတယ်ရဲ့ Honeymoon အခန်းမှာ တစ်ညတာ တည်းခိုခွင့်နဲ့ မနက်စာ Buffet သုံးဆောင်ခွင့်ပေးခြင်း ၊ ဧည့်ပရိတ်သတ် ဦးရေ ၅၀၀ နှင့်အထက် ဟိုတယ်မှ အစားအသောက်များပါ မှာယူဧည့်ခံပါက ဟိုတယ်ရဲ့ Special Honeymoon အခန်းမှာ တစ်လအတွင်း တစ်ညတာ လာရောက်တည်းခိုခွင့်နှင့်အတူ မနက်စာ buffet သုံးဆောင်ခွင့်တို့ကို မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ အနေနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပမှ မိမိနှစ်သက်ရာအစားအသောက်များ ယူဆောင်ဧည့်ခံလိုသော မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက်လည်း သီးခြားစီစဉ်ပေးထားလျက်ရှိပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများစွာရှိနေသော Central Hotel Yangon ရဲ့ မင်္ဂလာခန်းမသည်လည်း မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရွေးချယ်ရမည့် ခန်းမတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုသည်များကိုလည်း Central Hotel Yangon သို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ၍သော်လည်းကောင်း ဖုန်း 01 241007 (Ext:105) ၊ 09 8612170 တို့မှာ ဆက်သွယ် ၍သော်လည်းကောင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
zawgyi ျဖင့္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
မဂၤလာသတို႔သားသတို႔သမီးတို႔အတြက္ မဂၤလာပြဲတစ္ခုစီစဥ္ဖို႔ရာ အဓိက အက်ဆံုးက မဂၤလာရက္ျမတ္သတ္မွတ္ျခင္းပါ။ ဒီလို မဂၤလာရက္ကို သိရွိၿပီးေနာက္ အျခားအရာေတြ မစီစဥ္ခင္မွာ ဒုတိယ အလုပ္သင့္ဆံုးကေတာ့ မဂၤလာေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းပါပဲ။ မိမိက်င္းပလိုေသာ မဂၤလာရက္ျမတ္အတြက္ မဂၤလာခန္းမ ရဖို႔က အဓိက က်လာပါၿပီ။ မိမိအသိုင္း၀ိုင္းနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ ခန္းမျဖစ္ရမယ္၊ ဧည့္ခံပြဲလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာသြားလာႏိုင္တဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ရပါမယ္။ မဂၤလာဧည့္ခန္းမေနရာေရြးခ်ယ္ရာမွာ သင့္တင့္မွ်တေသာ ႏႈန္းထားျပည့္စံုေသာ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိေသာ မဂၤလာခန္းမေလး နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။
Central Hotel ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိႏွင့္ၾကၿပီးျဖစ္မွာပါ။ Central Hotel Yangon မွာ မဂၤလာပြဲေပါင္းေထာင္ခ်ီ က်င္းပခဲ့ရာေနရာေလးျဖစ္တဲ့ မဂၤလာခန္းမေလးအေၾကာင္း ထပ္ၿပီး မိတ္ဆက္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ မဂၤလာပြဲလာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အလြန္လြယ္ကူအဆင္ေျပလွပါတယ္။ ဒီခန္းမမွာ ဘယ္လို၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရမလဲဆိုတာ ဆက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါမယ္။ ခန္းမ မွာ ဧည့္သည္ဦးေရ ၅၀၀ တစ္ၿပိိဳင္တည္း ဧည့္ခံေကၽြးေမြးႏိုင္ပါတယ္။ မဂၤလာပြဲအခ်ိန္ အေနနဲ႕ကေတာ့ တစ္နာရီခြဲ အခ်ိန္ ရၿပီး တေန႔ကို မဂၤလာပြဲ (၄) ပြဲ လက္ခံက်င္းပေပးေနတာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မဂၤလာဧည့္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးႏိုင္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ အေနနဲ့ကေတာ့ Snack (၅)မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ ၊ ေရခဲမုန္႔) ၊ Snack Menu A-E ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ ၆၀၀၀က်ပ္ႏႈန္း၊ ၾကက္သား (ေထာပတ္ထမင္း/ဒံေပါက္) ႏွင့္ ေရခဲမုန္႔ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံလိုပါကတစ္ဦးလွ်င္ ၇၅၀၀က်ပ္။ ဆိတ္သား (ေထာပတ္ထမင္း/ဒံေပါက္) ႏွင့္ ေရခဲမုန္႔ အပါအ၀င္ တစ္ဦးလွ်င္ ၈၅၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းသာရွိသျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္လ်ာမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္ေကၽြးေမြး ဧည့္ခံ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ မဂၤလာပြဲက်င္းပမည့္ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ဟိုတယ္မွ တပြင့္ထိုး ပန္းအိုးမ်ားကို ေမတၱာလက္ေဆာင္စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ဧည့္ပရိတ္သတ္ဦးေရ ၂၀၀ ႏွင့္ အထက္မွာယူပါက မဂၤလာကိတ္ (Wedding Cake) လက္ဖြဲ႕ေပးျခင္း၊ ဧည့္ပရိတ္သတ္ဦးေရ ၃၅၀ ႏွင့္ အထက္ မွာယူ ဧည့္ခံပါက ဟိုတယ္ရဲ႕ Honeymoon အခန္းမွာ တစ္ညတာ တည္းခိုခြင့္နဲ႔ မနက္စာ Buffet သံုးေဆာင္ခြင့္ေပးျခင္း ၊ ဧည့္ပရိတ္သတ္ ဦးေရ ၅၀၀ ႏွင့္အထက္ ဟိုတယ္မွ အစားအေသာက္မ်ားပါ မွာယူဧည့္ခံပါက ဟိုတယ္ရဲ႕ Special Honeymoon အခန္းမွာ တစ္လအတြင္း တစ္ညတာ လာေရာက္တည္းခိုခြင့္ႏွင့္အတူ မနက္စာ buffet သံုးေဆာင္ခြင့္တို႕ကို မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ အေနနဲ႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပမွ မိမိႏွစ္သက္ရာအစားအေသာက္မ်ား ယူေဆာင္ဧည့္ခံလိုေသာ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္လည္း သီးျခားစီစဥ္ေပးထားလ်က္ရွိပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားစြာရွိေနေသာ Central Hotel Yangon ရဲ႕ မဂၤလာခန္းမသည္လည္း မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရမည့္ ခန္းမတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားကိုလည္း Central Hotel Yangon သို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဖုန္း 01 241007 (Ext:105) ၊ 09 8612170 တို႔မွာ ဆက္သြယ္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။
Central Hotel ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိႏွင့္ၾကၿပီးျဖစ္မွာပါ။ Central Hotel Yangon မွာ ရွိတဲ့ မဂၤလာပြဲေပါင္းေထာင္ခ်ီ က်င္းပခဲ့ရာေနရာေလးျဖစ္တဲ့ မဂၤလာခန္းမေလးအေၾကာင္း ထပ္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ မဂၤလာပြဲလာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အလြန္လြယ္ကူအဆင္ေျပလွပါတယ္။ သြားလာရ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒီခန္းမမွာ ဘယ္လို၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရမလဲဆိုတာ ဆက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါမယ္။ ခန္းမ မွာ ဧည့္သည္ လူ၅၀၀ တစ္ၿပိိဳင္တည္း ဧည့္ခံေကၽြးေမြးႏိုင္ပါတယ္။ မဂၤလာပြဲအခ်ိန္ အေနနဲ႕ကေတာ့ တစ္နာရီခြဲ အခ်ိန္ ရၿပီး တေန႔ကို မဂၤလာပြဲ (၄) ပြဲ လက္ခံက်င္းပေပးေနတာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မဂၤလာဧည့္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးႏိုင္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ အေနနဲ့ကေတာ့ Snack (၅)မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ ၊ ေရခဲမုန္႔) ၊ Snack Menu A-E ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ ၆၀၀၀က်ပ္ႏႈန္း၊ ၾကက္သား (ေထာပတ္ထမင္း/ဒံေပါက္) ႏွင့္ ေရခဲမုန္႔ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံလိုပါကတစ္ဦးလွ်င္ ၇၅၀၀က်ပ္။ ဆိတ္သား (ေထာပတ္ထမင္း/ဒံေပါက္) ႏွင့္ ေရခဲမုန္႔ အပါအ၀င္ တစ္ဦးလွ်င္ ၈၅၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းသာရွိသျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္လ်ာမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ေကၽြးေမြးဧည့္ခံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ မဂၤလာပြဲက်င္းပမည့္ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ဟိုတယ္မွ တပြင့္ထိုးပန္းအိုးမ်ားကို ေမတၱာလက္ေဆာင္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ဧည့္ပရိတ္သတ္ဦးေရ ၂၀၀ ႏွင့္ အထက္မွာယူပါက မဂၤလာကိတ္ (Wedding Cake) လက္ဖြဲ႕ေပးျခင္း၊ ဧည့္ပရိတ္သတ္သည္ ၃၅၀ ႏွင့္ အထက္ မွာယူ ဧည့္ခံပါက ဟိုတယ္ရဲ႕ Honeymoon အခန္းမွာ တစ္ညတာ တည္းခိုခြင့္နဲ႔ မနက္စာ buffet သံုးေဆာင္ခြင့္ေပးျခင္း ၊ ဧည့္ ပရိတ္သတ္ ၅၀၀ ႏွင့္အထက္ ဟိုတယ္မွ အစားအေသာက္မ်ားပါ မွာယူဧည့္ခံပါက ဟိုတယ္ရဲ႕ Special Honeymoon အခန္းမွာ တစ္လအတြင္း တစ္ညတာ လာေရာက္တည္းခိုခြင့္ႏွင့္အတူ မနက္စာ buffet သံုးေဆာင္ခြင့္တို႕ကို မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ အေနနဲ႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပမွ မိမိႏွစ္သက္ရာအစားအေသာက္မ်ား ယူေဆာင္ဧည့္ခံလိုေသာ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္လည္း သီးျခားစီစဥ္ေပးထားလ်က္ရွိပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားစြာရွိေနေသာ Central Hotel Yangon ရဲ႕ မဂၤလာခန္းမသည္လည္း မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရမည့္ ခန္းမတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားကိုလည္း Central Hotel Yangon သို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဖုန္း 01 241007 (Ext:105) ၊ 09 8612170 တို႔မွာ ဆက္သြယ္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 23, 2019 နေ့တွင်
MELIA Yangon Hotel ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ မင်္ဂလာမောင်နှံတွေရဲ့ ခမ်းနားတဲ့ အိမ်မက်တွေ ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာမောင်နှံတွေ ရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားများမှာ Melia Yangon Hotel ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Wedding Team ကနေ မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုချင်းစီကို ထူးခြားဆန်းသစ်စွာဖြင့် စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နှစ်အတွင်း ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကြောင့် မင်္ဂလာမောင်နှံများရဲ့ ယုံကြည်မှုများကို ထပ်မံရရှိခဲ့ပြီး မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားမြောက်မြား စွာကို လက်ခံရရှိထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အတူ ခမ်းနားလှပတဲ့ MELIA Yangon Hotel ရဲ့ Wedding Package တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
MELIA Yangon Hotel ရဲ့ လှပခမ်းနားစွာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Grand Ballroom ထဲမှာ မိမိစိတ်တိုင်းကျမင်္ဂလာပွဲကို လူဦးရေ အနည်းဆုံး ၃၀ဝ ကျော်မှ အများဆုံး ၆၀ဝ ကျော်အထိ ကျင်းပဧည့်ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန်းမအတွင်း စင်မြင့်၊ မင်္ဂလာလျှောက်လမ်း၊ ခန်းမအဝင် ပန်းအပြင်အဆင်များပါဝင်ပါတယ်။ ပရောဂျက်တာ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်၊ မင်္ဂလာကိတ်၊ မိတ်ကပ်ခန်း အသုံးပြုခွင့်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးအတွက် MELIA Yangon Hotel မှာ Tea Reception နဲ့ Dinner Reception ဆိုပြီး Wedding Package အမျိုးအစား (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။ Tea Reception မှာဆိုရင် Romance in Style – တစ်ဦးလျှင် ၁၉ ဒေါ်လာ၊ Romance in Elegence – တစ်ဦးလျှင် ၂၁ ဒေါ်လာ၊ Romance in Glamour – တစ်ဦးလျှင် ၂၃ ဒေါ်လာ အစရှိသဖြင့် ဧည့်သည်များမှ မုန့် (၃မျိုး ၊ ၄မျိုး၊ ၅မျိုး) နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dinner Reception အနေနဲ့ ကတော့ တစ်ဦးလျှင် ၄၅ ဒေါ်လာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး Chinese Set Menu / Asian Set Menu / Western Set Menu များကို နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Menu ရွေးချယ်ရာမှာ Food Tasting အနေနဲ့ ၆ဦးစာ အစမ်းစားသောက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Package တွေအပြင် တစ်ဦးလျှင် ၈ဝ ဒေါ်လာ ကျသင့်မည်ဖြစ်သော The Eternal Romance Dinner Package လည်းရှိပါတယ်။ ဒီ Package မှာတော့ Chinese Set Menu / Asian Set Menu / Western Set Menu များမှ နှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်သည့်အပြင် Soft Drink, Beer and House Wine တို့ကိုစိတ်ကြိုက် သောက်သုံးခွင့်ပါဝင်ပါတယ်။ The Eternal Romance Dinner Package မှာ Unique Pre Wedding Photo ရိုက်ခွင့် ပါ ပါဝင် ပါတယ်။
MELIA Yangon Hotel မှာ လာရောက်စုံစမ်းသူများအတွက် ဟိုတယ်ရဲ့ Wedding Package များကို ရှင်းပြပေးရုံသာမကပဲ မင်္ဂလာပွဲအတွက်အရေးကြီးတဲ့ မိတ်ကပ် နှင့် ဝတ်စုံ၊ မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှူးများ ၊ ဓါတ်ပုံနှင့် ဗွီဒီယိုရိုက် ကူးခြင်းများ၊ Music Band အစရှိတဲ့ အခြားလိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဆိုတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေနေပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုရွေးချယ်စရာ Wedding Package မျိုးစုံရှိပြီး ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ MELIA Yangon Hotel ရဲ့ မင်္ဂလာခန်းမကြီးမှာ သင့်စိတ်ကူး အိမ်မက်ထဲက မမေ့နိုင်စရာ မင်္ဂလာနေ့လေးတစ်ခုကို လာရောက် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ပေးစရာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ MELIA Yangon Hotel ရဲ့ Grand Ballroom မှာ ပွဲကျင်းပတဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံအတွက် ပွဲကျင်းပသည့်နေ့မှ တစ်လအတွင်း Premium Lake view မှာ တစ်ညတာ တည်းခိုခွင့်နဲ့ The Market All Day Dinning Restaurant မှာ မနက်စာ သုံးဆောင်ခွင့် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လစဉ်လတိုင်းအထူးပရိုမိုးရှင်းတွေလည်း ရှိသေးတာမို့ မင်္ဂလာမောင်နှံတို့အတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပါနော်။ ဒီလို ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်တွေအတွက် MELIA Yangon Hotel ရဲ့ Ground Floor မှာ ရှိတဲ့ Banquet Showroom သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍သော်လည်းကောင်း ဝ၁ ၉၃၄၅၀၀ဝ (သို့) [email protected] meliayangon.com.mm သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်းသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မင်္ဂလာမောင်နှံတို့လည်း မိမိတို့ရဲ့လှပသောအိပ်မက်များကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင် ကြပါစေ။
susan’s wedding guide
ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Golden Crab House မင်္ဂလာခန်းမ
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2019 နေ့တွင်
ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မင်္ဂလာပွဲလေးဖြစ်စေဖို့ ဧည့်လူဦးရေ ၅၀ဝ ထိ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဧည့်ခံနိုင်မယ့် မင်္ဂလာခန်းမတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဆယ်မိုင်ကုန်း အနန္တသူရိယလမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ Golden Crab House Wedding Hall ပါ။
ခန်းမအတွက် ပန်းခြောက်အလှဆင်ခြင်း အပြင် Music ၊ Video ၊ အခမ်းအနားမှူး၊ မိတ်ကပ် စသဖြင့် တစ်ပါတည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရသာကောင်းမွန်လှတဲ့ အစားအသောက်ပိုင်းမှာလည်း ရွေးချယ်စရာအမျိုးအစား တွေက ကော်ဖီ နဲ့ မုန့် တစ်ဦး ၆၀၀ဝ ကျပ်၊ ဒံပေါက်၊ထောပတ်ထမင်း တစ်ဦး ၈၀၀ဝကျပ်၊ ကြက်ဆီထမင်း တစ်ဦး ၅၅၀ဝ ကျပ် တို့အပြင် တရုတ်ဟင်းလျာ (၉) မျိုးပါတဲ့ package ကို တစ်ဦးလျှင် ၁၆၀၀ဝ မှ ၂၀၀၀ဝ ကျပ် အထိ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို များပြားကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ဘွတ်ကင် ယူတဲ့ သူတွေအတွက် အစားအသောက် ၊ ခန်းမကြေး၊ ပန်းခြောက်အလှဆင်ခြင်း တို့အား ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို မေတ္တာလက်ဆောင်ပေး မှာဖြစ်တာကြောင့်လက်မလွတ်သင့်ပါဘူးနော်။
Golden Crab House Restaurant No.170-4/113, Ananda Thuriya Road, Saw Bwa Gyi Gone Block, Insein Township, Yangon Ph – 09 73152892, 095004632 ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Facebook Page ဖြစ်တဲ့ https://www.facebook.com/GoldenCrabHouseRestaurant/ မှာလည်း ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
LOTTE HOTEL မှ ခမ်းနားလှပသော မင်္ဂလာပွဲများအကြောင်း
အောက်တိုဘာ 16, 2018 နေ့တွင်
မကြာခင်မှာ သီတင်းကျွတ်အချိန်အခါ ရောက်လာပြီမို့ ဝါကျွတ်မှာ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပမယ့် မောင်နှံအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်စရာ အချိန်အခါလေး တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။။ ဒီလို အချိန်မှာ ပွဲအတွက် အစစအရာရာ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို အကောင်းဆုံးတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ Lotte Hotel Yangon မှ ပွဲကျင်းပရာ Wedding Hall များနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ ဧည့်သည် (၁၀၀၀)ဦး လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့ မြေညီထပ် Crystal Ballroom ဖြစ်ပါတယ်။ ခန်းမအတွင်း လှပတဲ့စင်မြင့် အပြင် ခေတ်မီ lighting, Audio System များ နဲ့ LCD projector များလည်း ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ထပ် ခန်းမတစ်ခုကတော့ Sapphire Ballroomဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယထပ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီး ဧည့်သည် (၈၀၀) ဦးထိ လက်ခံကျင်းပ နိုင်ပါတယ်။ ခန်းမများမှာ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲသာမက အစည်းအဝေးပွဲ၊ မွေးနေ့ပွဲ ၊ Seminar များကိုလည်း ကျင်းပနိုင်ပါတယ်။
­အကျွေးအမွေး Package များ­အနေဖြင့် Entire Love, Solumate, Eternity, Infinity Love, Majestic, King & Queen စသော Package များရရှိနိုင်ပါတယ်။ အခုအခါ Lotte Hotel Yangon မှာ ဧည့်ခံ­ပွဲများအတွက် Myanmar Menu ၃ မျိုးကိုလည်း ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ စောင့်ကြိုနေမယ့် Lotte Hotel Yangon မှ Package များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သိလိုပါက 01 9351000 (Ext 1028) သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ­
စက်တင်ဘာ 22, 2018 နေ့တွင်
လွတ်လပ်မှုကို လူသားတိုင်း ခုံမင်နှစ်သက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ခရီးသွားခြင်းဟာ လူငယ်များသာမက လူကြီးများကလည်း သဘောကျ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ပင်လယ်ကြီးဟာ လှပတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ် ဖြစ်ရုုံသာမက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပါ လျှော့ချပေးနိုုင်တဲ့ သဘာဝတရားရဲ့ လက်ဆောင်တခုပါ။ ဒါကြောင့် လှပခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းတို့နဲ့အတူ မင်္ဂလာပွဲတွေကိုု ကမ်းခြေတွေမှာ သွားရောက် ဆင်နွှဲလာကြပါတယ်။ ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲများဟာ ငွေကြေးအကုုန်အကျ များတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် လွယ်ကူ သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများနဲ့ အထူးသတိပြုရန် အချက်အလက်များကို ယခုဆောင်းပါးလေးနဲ့တင်ပြလိုုက်ပါတယ်။
ဧည့်သည်ဦးရေ နှင့် ဘတ်ဂျတ်
မင်္ဂလာမောင်နှှံအနေနဲ့ စဉ်းစားရမှာက ဖိတ်ကြားမယ့် ဧည့်သည်တွေအတွက် ဟိုုတယ်အခန်း၊ ကားနဲ့ ကမ်းခြေရောက်နေစဉ် စားသုုံးမယ့် (ဧည့်ခံပွဲမဟုုတ်တဲ့) နေ့လည်စာ၊ ညစာတွေကိုုပါ တာဝန်ယူမှာလား။ကိုယ့်ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကိုုက်ညီမှု ရှိမရှိကို ဒီနေရာမှာ စတင်တွက်ချက်ပါ။ အချို့က ၄၅ယောက်စီး ကားကြီးတွေနဲ့ စုစုုစည်းစည်း သွားကြတာရှိသလိုု အချို့ကလည်း ကိုုယ်ပိုုင်ကားတွေနဲ့ သွားကြတာရှိပါတယ်။ ဧည့်ခံပွဲကျင်းပမယ့် ဟိုုတယ်မှာပဲ ဧည့်သည်တွေအားလုုံး တည်းခိုုကြမယ်ဆိုရင် စီစဉ်ရတာ ပိုုအဆင်ပြေပါတယ်။ အများအားဖြင့် နှစ်ဘက်မိသားစုဝင်များ၊ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများကိုသာ ဖိတ်ကြားပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျင်းပကြတာ ဖြစ်လို့ ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲကို တကယ်လိုက်နိုင်မယ့်သူကို အနည်းဆုံး တစ်လကြိုတင်စာရင်း ရယူထားပါ။ မိုးလေကင်းလွတ်တဲ့ ရာသီမျိုးမှာသာ ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိတာကြောင့် ဟိုုတယ်မှာ ဧည့်သည်များတည်းခိုုမယ့် အခန်းအတွက် အနည်းဆုုံး ၄လလောက် ကြိုတင်ဘွတ်ကင် လုပ်ပါ။
မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ဝတ်စုုံများကိုု ယူသွားနိုုင်တယ် ဆိုုပေမယ့် တစ်ခုုတော့ အကြံပြုပါရစေ။ ကမ်းခြေသည် ကုုန်းတွင်းပိုင်း ဒေသများထက် လေတိုုက်နှုန်း ပိုုမြင့်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ ဂါဝန်မျိုးဟာ ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲများနဲ့ လိုုက်ဖက်ပါတယ်။ ဂါဝန်အဖြူလေး ဝတ်မယ်ဆိုုရင် သောင်ပြင်ပေါ်မှာ အလှဓါတ်ပုံ ရိုုက်တဲ့အခါ သဲတွေနဲ့ ညစ်ထေးသွားတတ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေထိတာဖြစ်လို့ သေသေချာချာ မလျှော်နိုုင်သေးရင်တောင် ရေဆေးလိုုက်ပါ။
သတို့သမီး အများစုဟာ မင်္ဂလာပွဲအတွက် မိတ်ကပ်နှင့် ဆံပင် အလှခြယ်သဖို့ အတွက် မိတ်ကပ်ပညာရှင်များကိုု မိမိတို့ နေထိုင်ရာ ဒေသကနေ ကမ်းခြေထိတိုင်အောင် ခေါ်သွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ပွဲတစ်ခုလုုံးမှာ အလှဆုုံးလှနေဖိုု့ အရေးကြီးသည်မို့ ကပ်စေးမနည်း စေချင်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုုတ် စရိတ်လေး ချုံ့ချင်ရင် နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်ပညာရှင်များရဲ့ လက်ထောက်မိတ်ကပ်ပညာရှင်များကို ခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးတဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှုနဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေကို ကပိုကရို ထုံးဖွဲ့ ထားခြင်းက ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲမှာ သတို့သမီးလေးရဲ့ အလှကိုု ပိုုပြီး ပေါ်လွင်စေမှာပါ။
ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပသူ အများစုုသည် နေဝင်ဆည်းဆာအချိန်မှာ လက်ထပ်ပွဲကိုု သောင်ပြင်ပေါ်မှာ ကျင်းပပြီး ညစာစားပွဲကိုု ဟိုုတယ်၏ မြက်ခင်းပြင် (သို့မဟုတ်) ရေကူးကန် နံဘေးတွင် ဆက်လက် ကျင်းပကြပါတယ်။ နေဝင်ဆည်းဆာ အချိန်သည် ဘယ်နှစ်နာရီမှာ နေဝင်တယ် ဆုိုတာကိုု ပွဲမကျင်းပမှီ တစ်ရက်အလို ကတည်းက သေချာလေ့လာ ထားသင့်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ရမယ့် ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုုအဖွဲ့သည် အချိန် ၁ဝမိနစ်အတွင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ရတာ ဖြစ်လိုု့ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်များကိုု ခေါ်သွားသင့်ပါတယ်။
ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲများဟာ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ အငွေ့အသက် ရလိုသူများ ရွေးချယ်ရာဖြစ်လိုု့ ဖိတ်စာကိုု လှပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဖိတ်စာလေးတွေကိုု ရွေးချယ်ပါ။ အပြာနုုရောင်၊ စိမ်းပြာရောင်၊ ကြယ်ငါးမောင်နှံပုုံလေးတွေ၊ ခရုုပုုံလေးတွေပါတဲ့ ဖိတ်စာကုိုုုရွေးချယ်ပါ။ လက်ဆောင်ကမ်းကိုလည်း အထူးစဉ်းစားမနေပါနဲ့၊ ကမ်းခြေမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်လို့ရတဲ့ ကမာ၊ ခရုုသော့ချိတ် ကလေးတွေက အမှတ်တရ ဖြစ်စေပါတယ်။
အခမ်းအနား အလှဆင်တာကတော့ ချဲ့ရင်ချဲ့သလို ကုန်ကျစရိတ်က တက်လာမှာပါ။ ကမ်းခြေမှာ လက်ထပ်ပွဲလေး လုပ်ဖို့ အနည်းငယ်သာ အလှဆင်ပြီး ညစာစားပွဲ အတွက်ကိုတော့ မီးအလှဆင်တာကို ဦးစားပေးလိုက်တယ် ဆိုုရင် အခမ်းအနား အပြင်အဆင်အတွက် ငွေကုုန်ကြေးကျ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ ပန်းကြိုက်သူတိုု့ အတွက်ကတော့ ပန်းတွေနဲ့ဆင်နိုင် ပါတယ်နော်။ စားပွဲတင်ပန်းအိုးအစား ဖန်အိုးထဲမှာ သဲအနည်းငယ်၊ ခရုုအနည်းငယ်နဲ့ ကြယ်ငါးခြောက်လေးတွေ ထည့်ပြီး အလှဆင်လိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း ဧည့်သည်တွေ အတွက် စိတ်ကြည်နူးစရာပါပဲ။
ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲများမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Wedding Planner လိုအပ်ပါတယ်။ မရှိမဖြစ်လို့ မဟုုတ်သော်လည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေဖိုု့အတွက် စီစဉ်တတ်သည်မှာ Wedding Planner များဖြစ်ပါသည်။
ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ ကျင်းပမယ့် မင်္ဂလာပွဲများအတွက် ရာသီဥတုုသည် အင်မတန် အရေးပါလို့နေပါတယ်။ မုုတ်သုုံဝင်တတ်တဲ့အချိန်လား၊ မုုန်တိုုင်းသတိပေးချက် ရှိသလားဆိုုတာကိုု ပွဲရက်နီးလေလေ သတိထားရလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာလေ့မရှိတဲ့ လမျိုးမှာ ပွဲကျင်းပမယ် ဆိုုရင်လည်း မိုးလေဝသကိုတော့ အထူးသတိပြု စေချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မိုုးရွာခဲ့မယ်ဆိုုရင် ဟိုတယ်ရဲ့ စားသောက်ခန်း (သို့မဟုုတ်) ဘယ်နေရာမှာ ပွဲကျင်းပလို့ ရမလဲဆုိုတာကိုု တာဝန်ရှိသူများနဲ့ ကြိုတင်တိုင်ပင်ထားတာ မမှားပါဘူး။
ဧည့်သည်များနဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ပါဝင်ကူညီ အားဖြည့်ပေးမယ့်သူများ (ဥပမာ-မိတ်ကပ်ပညာရှင်၊ ဓါတ်ပုုံဆရာ)အတွက် ဟိုတယ်မှာ အခန်းနေရာချထားရေးအတွက်ကို မင်္ဂလာမောင်နှံမှ မစီစဉ်ဘဲ မိသားစုဝင်(သို့မဟုတ်) ခရီးသွားလုုပ်ငန်း အေဂျင်စီကိုု တာဝန်ပေးထားပါ။
ပင်လယ်စာများစားပြီး နေမကောင်း ဖြစ်တတ်တာကိုုလည်း သတိပြုရပါမယ်။ ဆေးဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။
ညစာစားပွဲမှာ ယမကာများ သောက်ထားတယ်ဆိုရင် သောင်ပြင်ပေါ်ဆင်းပြီး သီချင်းဆိုဖို့၊ ကခုန်ဖို့ကို စိတ်မကူးစေချင်ပါဘူး။ ကမ်းခြေမှာ ဟိုတယ်ရဲ့ လုုံခြုံရေးများ ရှိပေမယ့်လည်း မိမိရဲ့ အန္တာရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်တာ မမှားပါဘူး။
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ထားသူများအတွက် ယခုဆောင်းပါးလေးက အတိုုင်းအတာ တစ်ခုုအထိ အထောက်အပံ့ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ လှပတဲ့သဘာဝရဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုု နောက်ခံထားပြီး အပြုံးပန်းများ ဝေဆာနေမယ့် ကမ်းခြေမင်္ဂလာပွဲကိုု ပိုုင်ဆိုုင်နိုုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Your Wedding Dream at Chatrium Hotel Royal Lake Yangon Monsoon Mega Sale
စက်တင်ဘာ 5, 2018 နေ့တွင်
Save up to 10% on your Wedding Feast
ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်၏ အထူးမင်္ဂလာလက်ဆောင် အစီအစဉ်
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon မှာ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဖြင့် တစ်သက်တာ မေ့မရနိုင်သော ပျော်ရွှင်မှု အမှတ်တရများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ချင်ထရီယမ်၏ အထူးမင်္ဂလာလက်ဆောင် အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်၏ အထူးမင်္ဂလာလက်ဆောင် (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးကို ရယူပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲနှင့် မင်္ဂလာညစာစားပွဲများအတွက် weekend သာမက weekday ကြားရက်များတွင်လဲ ကျင်းပနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားသောကြောင့် မင်္ဂလာရက်မြတ် ရွေးချယ်ပြီး ဘိုကင်တင်နိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကို အောက်တိုဘာလ ၁၅ရက်နေ့ အထိ သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ဖုန်း 01 544500 လိုင်းခွဲ 6214 (သို့) [email protected].com သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်း booking တင်နိုင်ပါတယ်။
Chatrium Dream Wedding Packages မင်္ဂလာဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များကို Package အလိုက်ဈေးနှုန်းများနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Lily Package USD 16.00 net per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၃မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ)
Lotus Package USD 17.00 net per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၄မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ)
Daffodil Package USD 18.00 net per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၅မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ)
Brunch Receptiom @ Grand Ballroom
Orchid Package USD 20.00 net per pax (Bruch Selectiom Menu)
Dinner/Lunch [email protected] Grand Ballroom (or) Pool Garden
Jasmine Package USD 33.00 net per pax (မြန်မာ(သို့) တရုတ် (သို့) နိုင်ငံတကာဘူဖေး)
Tulip Package USD 37.00 net per pax (မြန်မာ(သို့) တရုတ် (သို့) နိုင်ငံတကာဘူဖေး)
Package အားလုံးအတွက် အနည်းဆုံးလူဦးရေ ၂၈ဝ မှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး အထက်ပါ Package များသာမက စေ့စပ်ပွဲများ၊ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားများ၊ ကလေးမွေးနေ့ပွဲများ အတွက်လည်း လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက်မီးနူးနှင့် ဧည့်ခံနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထည်ဝါလှသော Chatrium Grand Ballroom တွင် လူဦးရေ ၃၈ဝအထိ တည်ခင်းနိုင်ပြီး Ngapali Pool Garden တွင် လူဦးရေ ၇၀ဝ အထိ တည်ခင်းနိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာမောင်နှံတို့အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်ပရိတ်သတ်များကို အရသာကောင်းမွန် ပြည့်စုံလှသော အစားအသောက်များဖြင့် အထက်တန်းကျကျ တည်ခင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဟိုတယ်၏ Pastry Chef Mr. Somboong မှအမြင်တင့်တယ်လှပပြီး အရသာထူးခြားကောင်းမွန်သော Cake and Snack များကို တာဝန်ယူတီထွင်ပေးပြီး Lunch/Dinner နှင့် Brunch Reception တို့အတွက် Western Chef Mr. Kosol နှင့် Chinese Chef Mr. Chichtichoch တို့မှ စေတနာအပြည့်ဖြင့် ဆန်းသစ်ထားသော မီနူးများကို အကောင်းဆုံး အရသာခံစားမှုများဖြင့် စီမံချက်ပြုတ် တည်ခင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon တွင် မင်္ဂလာဆောင်သော မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် မင်္ဂလာခန်းမ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်၊ မင်္ဂလာပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သော အခမ်းအနားပြင်ဆင်မှုများနှင့် ပန်းအလှဆင်ခြင်းများကို လက်ဖွဲ့အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် မင်္ဂလာကိတ်၊ ရေခဲပန်းပုနှင့် ကားအလှဆင်ပေးခြင်း၊ နောက်ခံတေးသံသာ၊ မီးအလှပြင်ပေးခြင်း ကော်ဇောနီခန်းမတစ်လျှောက် ခင်းပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုလဲ လက်ဆောင်ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Chatrium ဟိုတယ်တွင် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပသည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နှင့် ကလေးမွေးနေ့များကို ၅ရာခိုင်နှုန်းဈေးလျှော့ပေးမည့် အထူးအခွင့်အရေးများလဲ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် Package အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ Chatrium Hotel ၏ Honeymoom အခန်းတွင် နံနက်စာအပါအဝင် တစ်ညတာ တည်းခိုခွင့်၊ ရေခဲပန်းပု၊ ရှန်ပိန် fountain၊ car decoration စသည်ဖြင့် အခြား နှစ်လိုဖွယ်ရာ အထူးအခွင့်အရေးများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Chatrium Dream Wedding Packages များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသည်များနှင့် ဘိုကင်တင်ရန်အတွက် မခင်မြတ်သူ ဖုန်း 01 544500 လိ်ုင်းခွဲ 6214 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတဲ့ အကြောင်း သတင်းကောင်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
စက်တင်ဘာ 1, 2018 နေ့တွင်
မင်္ဂလာပွဲအတွက် ရွေးချယ်စရာ သီချင်းများ
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အခိုုက်အတန့်လေးတိုုင်းအတွက် တေးသီချင်းများရဲ့ ပံ့ပိုုးမှုကအရေးပါလှပါတယ်။ မင်္ဂလာအခမ်းအနားများအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အဓိပ္ဗါယ်များနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ သီချင်းများကအမြဲနေရာယူစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ တေးသီချင်းများရဲ့ ပံ့ပိုုးမှုကမင်္ဂလာအခမ်းအနားရဲ့အရှိန်ကိုုလည်းပိုုမိုုတက်ကြွလာစေသည့်အပြင် အင်မတန်အမှတ်တရဖြစ်စေမယ့် အခိုုက်အတန့်လေးများကိုုဖန်တီးပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲတော့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားများအတွက် သီဆိုုသင့်တဲ့၊ ဖွင့်သင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းနဲ့ မြန်မာသီချင်းများကိုု Susan’s Wedding Guide (Myanmar) ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုုမိတ်ဆက်ပေးလိုုက်ပါတယ်နော်။
လိုုက်ဖက်တဲ့ဘဝ (Rဇာနည်၊ ဝိုုင်းစုုခိုုင်သိန်း)
Stand by me (နီနီခင်ဇော်)
Take my hand (Emily Hackett ft.Will Anderson)
Beauty in white (Westlife)
Marry me (JusonDerlo)
Marry you (Burno Mars)
Sule Shangri-la Hotel ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲများအတွက် အထူးအစီအစဉ်
ဩဂုတ် 6, 2018 နေ့တွင်
ဘဝရဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မင်္ဂလာပွဲလေးကို အမှတ်တရများစွာနဲ့ ကျန်ရှိစေဖို့ ဆူးလေရှန်ဂရီလာ ရန်ကုန်က စောင့်ကြိုနေတယ်ဆို စိတ်ဝင်စားမလား ။
နှစ်သစ်ကူးပြောင်းမဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့လေးကို ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ကသူနဲ့ ဘဝတသက်တာ လက်တွဲရင်း
ဆူးလေရှန်ဂရီလာရဲ့ အထူး စီစဉ်ထားတဲ့ ၉မျိုးထက်မနည်း ခံစားခွင့်တွေကို တနှစ်တာလုံး ခံစား ရမယ်တဲ့။ ပထမဆုံး ဟော်တယ်ရဲ့ Signature Wedding Package ကို ရယူပြီးဟော်တယ်ရဲ့ မြန်မာခန်းမမှာ ခမ်းခမ်းနားနား ဖြစ်စေဖို့ မင်္ဂလာစတိတ်စင်လျှောက်လမ်း နှင့် ဧည့်သည်တော် စားပွဲ အလည် ပန်းအလှဆင်ခြင်း ၊ ရေခဲအလှဆင် (၂)ခု နဲ့ မင်္ဂလာအပြင်အဆင်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာ နော်။
ဟော်တယ်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ဝန်ထမ်းတွေက ကိုယ့်ရဲ့ မင်္ဂလာညလေးကို ပြည့်စုံစေဖို့ အထူးအရသာ ရှိလှတဲ့ အစားအသောက် ၉ မျိုး (nine –course dinner) ပါဝင်သော ညစာ ၊ မင်္ဂလာကိတ် ၊ ဝီစကီ ၆လုံး နှင့် ရှန်ပိန် တစ်ပုလင်း လည်း ဖောက်ခွင့်ရဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ထားပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီထက် ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတာက ဒီပွဲလေးအတွက်ရော ပွဲပြီးသည့်တိုင် ခံစားလို့ရမယ့် ခံစားခွင့်တွေကို အောက်ပါအတိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
-မင်္ဂလာဦးညအတွက် ဟော်တယ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အခန်းဖြစ်တဲ့ Presidential Suite မှာ နဲ့ တညတာ အိပ်စက်တည်းခိုခွင့်
-ပျားရည်ဆမ်းခရီးအတွက် အခြား Shangri-La ဟော်တယ်တွေမှာ အခမဲ့တည်းခိုခွင့်
-မင်္ဂလာပွဲအတွက် W for Wedding မှ မင်္ဂလာဖိတ်စာ အခမဲ့ရရှိခြင်း
-ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေးအတွက် Kingsman Photo Club မှ ၂ဝရာခိုင်နှုန်း လျော့ဈေး ရရှိနိုင်ခြင်း
– Myanmar Wedding Guide Online page မှာ ကိုယ့်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်လေးတွေ ပါရှိခွင့်ရရှိခြင်း ဒါ့အပြင်
– ရှန်ဂရီလာရဲ့ ဟော်တယ် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အထူးခံစားခွင့်တွေရရှိမဲ့ Golden Circle မန်ဘာဖြစ်ခွင့်
-ဆူးလေရှန်ဂရီလာရဲ့ တနှစ်ပတ်လုံး အစားအသောက် တွေအတွက် ပရိုမိုးရှင်းတွေရရှိမဲ့ GEMs မန်ဘာဖြစ်ခွင့်
-မင်္ဂလာမောင်မယ်ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် အတွက် အထူးလက်ဆောင်ရရှိခွင့်
-မင်္ဂလာမောင်မယ် နှစ်ဦးလုံးရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် ရရှိခွင့် တွေ ပါဝင်မှာ ပါနော်။
ဒီလို အများကြီးသော ခံစားခွင့်တွေ ရရှိမဲ့ ကံထူးရှင် မင်္ဂလာမောင်မယ် တစုံတွဲဖြစ်ဖို့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ညလေး ကို လူ အနည်းဆုံး ၃၀ဝ နဲ့ အထက် တစ်ယောက်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆ ဖြင့် ရရှိ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် သိလိုရင်တော့ ဟော်တယ်ရဲ့ Wedding Specialist ကို ဖုန်းနံပါတ် ဝ၁ ၂၄၂ ၈၂၈ သို့မဟုတ် အီးမေး လိပ်စာ [email protected] ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ အမြန်ဆုံး ပဲ ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်လိုက်ပါတော့နော်။
LOTTEE Hotel Yangon မှမြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးအကျယ် အခမ်းနားဆုံး Wedding show ပွဲ
ဇူလိုင် 13, 2018 နေ့တွင်
LOTTE Hotel Yangon မှမြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးအကျယ် အခမ်းနားဆုံး Wedding show ပွဲအတွက် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပ
မြန်မာတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း တစ်သက်မှာတစ်ခါ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပလေ့ရှိသော မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားများ အတွက် LOTTE Hotel Yangon မှ ပထမဆုံးအကြိမ ်အဖြစ် The First Wedding Show ပွဲကြီးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့နှင့် ၂၂ ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပသွားမည့် အကြောင်း စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့က LOTTE Hotel Sapphire Foyer တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
LOTTE ဟိုတယ်တွင် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အခမ်းနားဆုံး ကျင်းပသွားမည့် အဆိုပါ Wedding Show ပွဲကြီးကို လာရောက်မည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် မင်္ဂလာပွဲ စီစဉ်သည့်အခါ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန်နှင့် ပွဲအတွက် လိုအပ်သော အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို အချိန်အများကြီး ပေးစရာမလိုပဲ တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်ချိန်တည်းနဲ့ လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ယခုပွဲကို ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တန်ဖိုးထား ချစ်ခင်ရသော ဧည့်သည်တော်များ အတွက် ဘဝတွင် အမြဲ အမှတ်ရနေစေမည့် မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားများ ကျင်းပရာမှာ အခရာကျသည့် မင်္ဂလာဝတ်စုံများ၊ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုများ၊ လက်ဝတ်ရတနာ ဒီဇိုင်းများ အတွက် ယခုပြသမည့် ပြပွဲအတွင်းမှာ နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာများ၏ နောက်ဆုံးပေါ် မင်္ဂလာဝတ်စုံဒီဇိုင်းများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မိတ်ကပ်ပညာရှင်များ၏ မိတ်ကပ် လိမ်းခြယ် ပြင်ဆင်မှုများ၊ လက်ဝတ်ရတနာ ဒီဇိုင်းဆန်းများကို ပါဝင် ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြပွဲအတွင်း စနစ်ကျသော မင်္ဂလာပွဲ အစီအစဉ်များအတွက် Show Program များ၊ ခမ်းနား ထည်ဝါသော ခန်းမ အပြင်အဆင်များ၊ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများ၊ အသုံးပြုထားသော မီးအလင်းအမှောင် စနစ်များနှင့် ပန်းအလှဆင် ပုံဖော်မှုများ ပန်းအလှဆင် ဒီဇိုင်းများကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ရန် LOTTE ဟိုတယ်မှ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် ပထမဦးဆုံးသော Wedding Show ကျင်းပရာ ခန်းမကျယ်ကြီးတွင် အပြစ်ကင်းဖြူစင်ခြင်း စွဲမက်ဖွယ်ရာ ကောင်းခြင်းကို ရည်ညွှန်း ပုံဖော်ထားသော “Pure White Concept” အခမ်းအနား ပြင်ဆင်မှုကို တွေ့မြင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အဖြူရောင်များ လွှမ်းခြုံထားသော မင်္ဂလာ အခမ်းအနား အပြင်အဆင်ကို အဓိကထားပြီး တမူထူးခြား လှပစွာ ပုံဖော် ပြသထားပါသည်။
နိုင်ငံကျော် ဒီဇိုင်နာများ ဖြစ်ကြသည့် ဒီဇိုင်နာ ကောင်းမြတ်၊ စနီ´လင်းနိုင်၊ Dress Gallery နှင့် ဒီဇိုင်နာ သျှတရတို့မှလည်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားကြသည့် ရင်သပ် အံ့ဩရှုမောဖွယ် လှပသည့် မင်္ဂလာဝတ်စုံ ဒီဇိုင်း ဖန်တီးမှုများကို ပြပွဲအတွင်း ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံကျော် မိတ်ကပ်ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသည့် မိတ်ကပ်မေဦးမောင်နှင့် မိတ်ကပ်လင်းလင်းတို့မှ ပြပွဲတွင် မိတ်ကပ်စပွန်ဆာများ အဖြစ် ပါဝင်ကူညီ ပေးကြမည်ဖြစ်ပြီး ပန်းအလှဆင် မာမီကျော်မှလည်း ပြပွဲတွင် ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ တန်ဖိုးရှိလှသော အချိန်များအတွက် မင်္ဂလာပွဲ စီစဉ်ကျင်းပရသည့်အခါ အချိန်များစွာ ကုန်ဆုံးမည့်အစား ယခု LOTTE Hotel the First Wedding Show မှတဆင့် တစ်နေရာတည်းမှာ မင်္ဂလာပွဲနှင့် ပတ်သတ်သမျှ ဝန်ဆောင်မှု အားလုံးကို လွယ်ကူ မြန်ဆန်အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
LOTTE ဟိုတယ်မှ ယခု ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Wedding Show အခမ်းမနားပွဲကြီးကို “Signature Wedding and Event Planning” မှလည်း ပါဝင်ကူညီ ပေးထားပါသည်။ ပြပွဲကို Main Sponsor အဖြစ် “Win & San Diamond and Fine Jewelry” မှ ပါဝင်ကူညီပေးပြီး Gold sponor များအဖြစ် “Lynn & Win နှင့် Dress Gallery” ၊ Silver Sponsors များအဖြစ် “Khit Sunn Yin Lotus, Silk & Cotton Hand Weaving Center ၊ UAB Bank ၊ Life & Palace Magazine ၊ စိ်န်နန်းတော်” တ်ို့နှင့်အတူ “MNA Airline” မှ Airline Partner အဖြစ် ယခုပြပွဲကြီးကို ပါဝင် ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။
LOTTE Hotel The First Wedding Show ကို တက်ရောက်လာကြမည့် ဧည့်သည်တော်များထဲမှ မင်္ဂလာပွဲအတွက် ကြိုတင် စာရင်းပေးသော မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ် အနေဖြင့်လည်း ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Promotion နှင့် Lucky Draw အစီအစဉ်များ ကိုလည်း ထည့်သွင်း ထားပေး ကြောင်းတို့ကို သိရှိရပါသည်။
ယခုနှစ် မင်္ဂလာရှိသော ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်ချိန်ခါ မင်္ဂလာဆောင် ရာသီအမှီ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပရန် ရည်ရွယ်ထားကြသည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများနှင့် မိဘဆွေမျိုးများ အတွက် အထူးရည်ရွယ် ထားသောကြောင့် ယခု အားလပ်ရက်၊ ရုံးပိတ်ရက် (စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ) ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့နှင့် ၂၂ ရက်နေ့များမှာ LOTTE Hotel ၏ Wedding Show ကြီးကို ကိုယ်တိုင်လာရောက် လေ့လာကြည့်ရှုဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
မေ 10, 2018 နေ့တွင်
ဆောင်းပါးလေးတွေ မတင်ဖြစ်တာ ကြာပြီမို့ ချစ်ရတဲ့ သတို့သမီးလေးတွေအတွက် Susan’s bridal Magazine မှာ ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ရွေးချယ် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သတို့သမီးလေးတွေအတွက် တကယ့်ကို အကျိုး ရှိစေမယ့် ဆောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်အဖြစ် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲမှာ လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးနဲ့လှပကျော့ရှင်းနေတဲ့သတို့သမီးလေး တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းဝင်လာတာကို နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ အားလုံးဝိုင်းပြီး ငေးမောကြည့်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးက သတို့သမီးတိုင်းကို ရင်ခုန်သံတွေမြန်စေတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိ ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသော ချစ်သူမိ်န်းကလေးကို အကာအကွယ် ပေးလို့ ဘဝတလျောက်လုံးအတူလက်တွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ သတို့သားအနေနဲ့လည်း မင်္ဂလာကောဇော လျှောက် လမ်းထက်မှာ အလှဆုံးသတို့သမီးလေးနဲ့အတူ ယှဉ်တွဲလျှောက်လှမ်းနေရတာမို့ ရင်ခုန်သံတွေ ဝုန်းဒိုင်းကြဲ ဆူညံသွားစေလောက်တဲ့ တဒင်္ဂတစ်ခဏလေးလည်းဖြစ်မှာပါ။ ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာ အလှဆုံး သတို့သမီးလေးအဖြစ် အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင်အဓိကပံ့ပိုးပေးနေတာကတော့ကျက်သရေအပေါင်းခညောင်း တဲ့မင်္ဂလာသတို့သမီးဝတ်စုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့သတို့သမီးလေးရဲ့အလှ တရားတွေကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်အဓိကပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံ ဒီဇိုင်းကဏ္ဍကလည်း အခရာ ကျလာပါပြီ။ သတို့သမီးလေး ထူးခြားလှပနေဖို့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာ မှန်ကန်တဲ့သတို့သမီးဝတ်စုံဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်ဆင်မြန်းတတ်ဖို့ကလည်း လိုအပ်လာပါပြီ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသွင်အပြင် အချိုးအစားတွေ ကလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူကြတာကြောင့် ကိုယ့်ပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးတွေကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အနောက်တိုင်း သတို့သမီးဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေမှာ လည်ပင်းပုံစံလေး ပြောင်းလဲသွားရုံနဲ့ အသွင်အပြင်ပေါ်သက်ရောက်သွားတတ်တာကြောင့်မှန်ကန်အောင် ရွေးချယ်တတ်ရင်ဖြင့် သတို့သမီးဝတ်စုံ ကဏ္ဍလေးအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လှပဆန်းပြားတဲ့သတို့သမီးဝတ်စုံတွေထဲမှာမှ ခုတလော ခေတ်စား နေတဲ့ လည်ပင်းဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံတွေကို ဒီကဏ္ဍလေးမှာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
သတို့သမီးဝတ်စုံတွေထဲမှာအခြေခံအကျဆုံးပုံစံလို့ဆိုရမှာပါ။ လူကြိုက်အများဆုံး သတို့သမီးဝတ်စုံ လည်ပင်းဒီဇိုင်း ဖြစ်ပြီး ကဗျာဆန်ဆန်ထူးခြားတဲ့ လှပမှုကိုဆောင်ကြဉ်းပေးတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ပြတ်ဒီဇိုင်းပုံစံမှာတော့ သတို့သမီးက လှပထင်ရှားတဲ့ ဘယက် ဒါမှမဟုတ် လည်ဆွဲရတနာမျိုးကို ဆင်ယင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ပြတ်ဒီဇိုင်းရဲ့သဘောကိုက ရင်ရဲ့အထက်နားကနေ လက်မောင်းအောက်နား ပတ်သွားပြီး ကျောမှာမှ ဇစ်၊ ကြယ်သီး ဒါမှမဟုတ် ဖဲကြိုးနဲ့ချည်ထားတာမျိုးမို့ ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းကြီးတဲ့ သူတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်လွန်းသူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ သတို့သမီးဆိုရင်တော့ဒီရင်ပြတ် ဒီဇိုင်းက သတို့သမီးရဲ့အလှကို ပြိုင်စံရှားဖြစ်သွားစေမှာပါ။
မိန်းကလေးတစ်ချို့က အတိုအပြတ်တွေ၊ ရင်ဟိုက်တွေ ဝတ်ရတာ မကြိုက်ကြပါဘူး။ သာမာန်ထသွားထလာ ဝတ်စားကြတဲ့ အခါမျိုး၊ ပါတီပွဲတွေမျိုးမှာတော့ အတိုအပြတ်တွေ၊ အဟိုက်တွေဝတ်ဆင်ကြပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာဧည့်ခ့ပွဲမှာတော့ သိပ်ပြီးပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ပွဲမထွက်လိုတဲ့ သတို့သမီးလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ ဗွီလည်ပင်းပုံစံနဲ့ဇာလက်ရှည် သတို့သမီးဝတ်စုံက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ပန်းသီးခန္ဓာကိုယ်လိုမျိုး ပုပုလုံးလုံးသတို့သမီးလေးတွေအတွက်လည်း ဗွီလည်ပင်းပုံစံနဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံက ဟန်အကျဆုံးပါပဲ။ ဗွီလည်ပင်းပုံစံကြောင့် သတို့သမီးလေးရဲ့ လည်တိုင် ပိုမို ရှည်သွယ် သယောင်ဖြစ်သွားစေပြီး အရပ်လည်းနဂိုထပ် ပိုမြင့်သွား သယောင်ဖြစ်သွားစေမှာပါ။ စင်ဒရဲလားဂါဝန်ပုံမျိုးနဲ့သာမက သဲနာရီပုံ နောက်မြီးရှည် ဂါဝန်ပုံစံမျိုးနဲ့လည်း အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့ လည်ပင်းပုံစံလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတို့သမီးရဲ့ မျက်နှာအနေအထားက ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးဆိုရင်တော့ ဒီလို ဗွီလည်ပင်းပုံစံနဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးကို ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်လျော်ဆုံးပဲ လို့ အကြံပြုပါရစေနော်။
အသည်းနှလုံးပုံလည်ပင်းဆိုတာက ရင်ပြတ်ပုံစံကိုမှ ရင်ညွန့်နေရာမှာ ကကြီးပုံအကွေးအဝိုက်လေးနဲ့ ထပ်ပြီးပုံဖော်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ပြတ်ပုံစံနဲ့အလားတူစွာပဲ ခန္ဓာကိုယ်ရွေးတတ်တဲ့သဘောရှိပြီး အမိုက်စားကောက်ကြောင်းနဲ့ သတို့သမီးတွေဆိုရင်တော့ ပုံပြင်ထဲက စင်ဒရဲလားလေးလိုမျိုး မြင်သူတကာ ငေးရတဲ့သတို့သမီးလေးဖြစ်သွားမှာပါ။ ပခုံးကျယ်တဲ့သတို့သမီး ဆိုရင်တော့ရင်ပြတ်ပုံစံထက်ကို အသည်းနှလုံး ပုံစံကပိုပြီးကျယ်သွားစေဦးမှာမို့ ပခုံးကျယ်၊ ပခုံးကားတဲ့ သတို့သမီးလေးတွေကတော့ ဒီပုံစံကို မရွေးချယ်သင့်ပါဘူး။ အသည်းနှလုံးပုံစံလည်ပင်းကိုတော့ ကြိုက်ပါရဲ့၊ သိပ်ပြီးဟိုက်တာမို့ မဝတ်ရဲဘူး ဆိုသူတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာနောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အသည်းနှလုံးပုံလည်ပင်းရဲ့ အကွေးအဝိုက် နေရာကနေ လည်ပင်းထိပ်ဖျားထိ ဇာပါလေးနဲ့တွဲ ချုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကလည်း မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာပါးပြည့်အသည်းနှလုံးပုံ လည်ပင်းပုံစံလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပခုံးဖွင့်ပုံစံ (Off the Shoulder)
ဆွဲဆောင်မှုရှိရုံသာမက ဂန္တဝင်ဆန်ဆန်လှပလိုတဲ့သတို့သမီးတွေအတွက် ဘယ်တော့မှရိုးအီမသွားတဲ့ ပခုံးဖွင့်လည်ပင်းပုံစံနဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံက အသင့်လျော်ဆုံးပါပဲ။ ပခုံးဖွင့်ပုံစံဆိုပေမယ့် ကိုယ်မှာချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်တာမို့အရမ်းပေါ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ အလှအပကို လှစ်ဟရုံလေးနဲ့ ကျက်သရေရှိရှိလှပစေမယ့် မင်္ဂလာသတို့သမီးဝတ်စုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်းကတိုင် အနောက်တိုင်း ရဲ့ ခမ်းနားလှတဲ့တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲတွေမှာ ဒီပခုံးဖွင့်လည်ပင်းပုံစံနဲ့မင်္ဂလာသတို့သမီး ဝတ်စုံက ရေပန်းစားခဲ့တာမို့တော်ဝင်နန်းဆန်ဆန် လှပခမ်းနားမှုကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ သတို့သမီးတွေအတွက် ဒီလည်ပင်းပုံစံက အသင့်တော်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပခုံးဖွင့်ပုံစံဖြစ်ပေမယ့် ရင်ပြတ်ပုံစံလည်ပင်းနဲ့မတူတာက ပိန်သွယ်သူဖြစ်စေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထွားသူ ဖြစ်စေ ဒီပုံစံက လိုက်ဖက်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပခုံးကျယ်ပြီး အရပ်ရှည်တဲ့ သတို့သမီးတွေအနေနဲ့ ကုပ်သိုင်းပုံစံလည်ပင်းနဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံက အဆင်ပြေသွားစေမှာပါ။ ပခုံး နောက်ဘက်ကိုသာ ဖွင့်ပေးထားပြီး လည်ပင်းနောက်ဘက်ကနေ ရင်ဘတ်ရှေ့ကို သွယ်ဆင်းသွားတဲ့လည်ပင်းပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန့်ကားတဲ့ပခုံးပြင်ကို ပိုင်းခြားပေးထားတာမို့နဂိုပင်ကိုယ် ပခုံးကားတာကို မသိသာအောင် လှည့်ဖျားပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားစေမှာပါ။ ရင်ဘတ်နဲ့ လက်မောင်းရင်းအောက်နားမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားလွယ်ကူစေတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်တာမို့ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေတစ်ဝိုက်မှာ အဆီပြင်လေးရှိတဲ့အတွက် ဝတ်စုံဝတ်လိုက်တဲ့အခါ အရစ်ရစ်တွေထပြီး မလှမှာ စိတ်ပူနေရတဲ့ သတို့သမီးလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံး လည်ပင်းပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာပုံစံ (Queen Anne)
ကြာပုံလည်ပင်းအမျိုးအစားကလည်း သတို့သမီးအများစု ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ လည်ပင်းပေါက် ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုက်များကြတယ်ဆိုတာကလည်း ကြာပုံလည်ပင်းနဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံတွေကို ဆင်မြန်းပြီး ပွဲထွက်ကြတဲ့သတို့သမီးတိုင်းက အရမ်းကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှကို ပိုင်ဆိုင်သွားတတ်ကြလို့ပါပဲ။ ဒီလိုသတို့သမီးဝတ်စုံနဲ့ လျှောက်လှမ်းလို့ ပွဲထွက်လာတဲ့အခါ လက်ကိုင်ပန်းနဲ့ ပွဲတစ်ခုလုံးမှာ ဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေအားလုံးကတောင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘဲ ဦးညွှတ်ရတဲ့ သတို့သမီးလေးအဖြစ် ခံစားသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတို့သမီးလေးရဲ့လည်ပင်းနဲ့ရင်ဘတ်အလှကို ဝင့်ကြွားလှပစေတဲ့အပြင် ရင်နဲ့ခါးအလှကို အချိုးကျသွားစေတဲ့အသွင်မျိုး ဖြစ်စေတာကြောင့် ကြာပုံလည်ပင်းဒီဇိုင်းလေးက သတို့သမီးဝတ်စုံတွေမှာ ကျော်ကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဲနာရီပုံနောက်မြီးရှည် မင်္ဂလာဂါဝန်မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စင်ဒရဲလားဂါဝန်ပုံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက်တဲ့လည်ပင်းဒီဇိုင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လည်ထောင်ပုံစံ (High Neck)
အရပ်ရှည်ရှည်၊ လည်တိုင်ရှည်ရှည်နဲ့မို့ ရင်ပြတ်ဝတ်စုံတွေ၊ လည်ဟိုက်ဝတ်စုံတွေ ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အခါ သစ်ကုလားအုတ်လို ဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်း ခံစားနေရတဲ့သတို့သမီးလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့ စမတ်ကျကျလှပပြီး ဘယ်တော့မှ ရိုးအီမသွားတဲ့လည်ထောင်ပုံစံလေး တွေပါပဲ။ လည်ထောင်ပုံစံမှာ တရုတ်လည်ထောင်ပုံစံမျိုးရှိသလို တဆက်တည်းထောင်သွားတဲ့ အပြည့် လည်ထောင်ပုံစံလေးတွေလည်းရှိတာမို့ လည်တိုင်ရှည်သတို့သမီးလေးတွေ စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ လည်ထောင်ပုံစံနဲ့ဇာလက်ရှည် သတို့သမီးဝတ်စုံလေးတွေက ဂန္တဝင်ဆန်ပြီး ကျက်သရေရှိလှတဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးတွေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှည်မို့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်စရာဖြစ်သွားမယ်လို့ယူဆကြတဲ့ သတို့သမီးလေးတွေအတွက်ကျတော့ လည်ထောင်ဒီဇိုင်းကိုမှ လွတ်လပ်တဲ့ ပုံဖြစ်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ လည်ထောင်ပုံစံကိုမှ ကုပ်သိုင်းပုံစံနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပုံလေးက ပိုမိုပေါ့ပါးသွားစေတဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးအဖြစ် ဖန်တီးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လည်ပင်းဒီဇိုင်းလေးတွေက သတို့သမီးတွေအတွက် အဆင်ပြေဆုံးနဲ့ အလှပဆုံး ဒီဇိုင်း(၇)မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လည်ပင်းဒီဇိုင်းလေးတွေကို သတို့သမီးလေးတွေ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီး သူမတူတဲ့ အလှအပမျိုးနဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်စေဖို့ရာ ဒီဆောင်းပါးလေးက ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ကိုယ်တူ ရွှေလက်တွဲကြတော့မယ် မင်္ဂလာစုံတွဲတိုင်း အရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး လှပတဲ့အနာဂတ်ခရီးလမ်းကို လက်တွဲခိုင်မြဲစွာဖြင့် လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့တောင်းဆုပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်တွေနဲ့ CBC Ballroom
ဧပြီ 19, 2018 နေ့တွင်
မင်္ဂလာပွဲအတွက် မင်္ဂလာရက်မြတ် ရွေးချယ်ပြီးနောက် ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကမင်္ဂလာနေရာရွေးချယ် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာခန်းမနေရာက နှစ်ဖက်မိသားစု မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝန်းနဲ့ နီးတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ရမယ်၊ ကိုယ်ဖိတ်မယ့်လူဦးရေနဲ့ လည်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရမယ်၊ အစားအသောက်ကလည်းကောင်းရမယ် နောက်တစ်ခုကားပါကင်လည်းအဆင်ပြေရမယ်ဆိုတာတွေကထည့်စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေပါ။ အခုဆိုရန်ကုန်မြို့မှာ မင်္ဂလာခန်းမပါဝင်တဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်။ ရွေးချယ်စရာတွေကလည်းသူ့အနေအထားနဲ့ သူအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်။
ဒီမင်္ဂလာခန်းမတွေထဲကနေမှ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံလမ်းနဲ့ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ထောင့်မှာတည်ရှိတဲ့ Co-operative Business Center ရဲ့ ၅လွှာက CBC Ballroomနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ CBC Ballroom မှာဧည့်သည် ဦးရေ ၂၀ဝ ထိလက်ခံကျင်းပနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ခန်းမကို ၂ နာရီအသုံးပြုနိုင်ပြီးနောက်ခံစာတန်းနဲ့ မင်္ဂလာစင်မြင့်ပေါ်မှာစားပွဲတင်ပန်း၁ တစ်ခု၊ ပန်းတိုင် ၄ တိုင် ပြင်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာခန်းမဝင်ပေါက်မှ မင်္ဂလာစင်မြင့်အထိကော်ဇောနီခင်းပေးထားမှာဖြစ်ပြီးလျှောက်လမ်းတလျှောက်မှာတော့ ပန်းတိုင် ၈တိုင် ပါဝင်ပါမယ်။မင်္ဂလာနောက်ခံတီးလုံးပါဝင်ပြီး MC Stage အတွက် ပန်းအပြင်အဆင် လည်းပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မင်္ဂလာအကျွေးအမွေးအတွက် Package ကတော့ Package A နှင့် Package B ဆိုပြီးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Package A မှာဆိုရင် – မုန့် (၃)မျိုး၊ Coffee or Tea နဲ့ Ice Cream တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Package B မှာတော့ မုန့်(၄)မျိုး Coffee or Tea, Ice Cream တို့ပါဝင်ပါတယ်။Package C ကတော့ ဒံပေါက် (သို့) ထောပတ်ထမင်း (သို့) ကြက်ဆီထမင်း နှင့်ရေခဲမုန့်တို့ပါဝင်ပါတယ်။
CBC Ballroom မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့် မောင်နှံတို့အတွက် အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ် တစ်ခုကတော့ ShwePyi Resort ဒါမှမဟုတ် KMA Hotels Group ရဲ့ ဟိုတယ်တွေထဲကနှစ်သက်ရာတစ်ခုမှာတစ်ညတာ(မနက်စာပါပြီး) တည်းခိုခွင့်ရမယ့် အစီစဉ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတော့ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့ နေ့မှစပြီး ၃ လအတွင်းအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် ဟန်းနီးမွန်းခရီးထွက်မယ်ဆိုလည်းအသင့်ပါလို့ ပြောပါရစေ။ ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ အချက်အလက်တွေအတွက်လည်း CBC Ballroom (Hotline: 09 44 55 66 036 ,[email protected]) သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနို်င်ပါကြောင်းမင်္ဂလာမောင်နှံတို့အတွက် သတင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 9, 2018 နေ့တွင်
မင်္ဂလာပွဲများမှာ သတို့သမီးလောင်းကို် အားလုံးထက် အရေးကြီးသူအနေနဲ့ မှတ်ယူကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်သတို့သမီးရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေကိုလည်း မိသားစုနဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းများ အားလုံးက ဦးစားပေး လေ့ရှိပါတယ်။ သတို့သမီးအများစုဟာ မင်္ဂလာပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာများကို ဦးဆောင် ရွေးချယ် လေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပရာ နေရာနဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ အခြားသော အရာများမှာ အသုံးပြုမယ့်အရောင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့ သတို့သမီးဝတ်မယ့်ဝတ်စုံရဲ့ အရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီဖြစ်အောင်စဉ်းစားရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာထိုင်မသိမ်းဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီး မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပမယ့်သတို့သမီးတို့သည် မိမိတို့ရဲ့ အသားအရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး မိမိဝတ်မယ့်ဝတ်စုံကို ရွေးချယ်ပြင်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ အသားဖြူသူများ အတွက်ဘယ်အရောင်ကိုပဲရွေးရွေး အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အသားဖြူသူတို့က အရောင်တောက် တောက်(လင်းသောအရောင်) များနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ အသားအရောင်လတ်သူ (အနည်းငယ်ညိုသူ) ဆိုရင်တော့ ရွှေရောင်၊ ပန်းရောင်၊ ပန်းသခွားရောင်တို့နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ အသားညိုသူများကတော့ အဝါရောင်အဖျော့၊ ရွှေရောင် အဖျော့တို့ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်မယ့် သတို့သမီးတို့သည်လည်းအဖြူရောင်ကိုပဲဝတ်ဝတ် အခြားအရောင်များထဲက ဝတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့အသားအရည်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီပြီး မိမိကိုပွဲလယ်မှာ လှပတင့်တယ်စေဖို့အတွက် သေသေချာချာ စီစဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့အယူအဆမှာတော့ ရွှေဖလားရောင်၊ ပန်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်တို့ကို မင်္ဂလာအရောင်အနေနဲ့ မှတ်ယူကြပါတယ်။ အနီရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်တို့ကိုရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်။ တရုတ်တို့ရဲ့ အယူအဆမှာတော့ အနီရောင်သည် မင်္ဂလာ အရောင်ဖြစ်ပြီး ရှေးရိုးဆန်သူများကတော့အနက်ရောင်ကို လုံးဝရှောင်ကျဉ် ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာ ခေတ်မှီတဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနား များမှာတော့ သတို့သမီးရဲ့ဝတ်စုံအရောင်ကို မိမိရဲ့ အသားအရည်နဲ့ယှဉ်တွဲရွေးချယ် ယုံသာမက မင်္ဂလာမောင်နှံရဲ့ချစ်သူသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တရများကို ထင်ဟပ်စေမယ့် စိတ်ကြိုက် အရောင်ကိုလည်းထည့်သွင်း စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့် ခန်းမရဲ့ရှိရင်းစွဲအရောင်တွေကလည်း မင်္ဂလာပွဲမှာကိုလှသည်ထက် ပိုလှအောင် ပံ့ပိုး ပေးမယ့် ပန်း၊ ဘောလုံးနဲ့အခြားသော အဆင်တန်ဆာများနဲ့လိုက်ဖက်ညီမှုရှိဖို့ကိုလည်း ပညာရှင် များနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး စီစဉ်ကြပါတယ်။
အရောင်များမှာ ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်များနဲ့အတူ ရှေးယခင် ကတည်းက လူသားတို့ အပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုတယ်၊ မည်သည့်အတွက် အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုများလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ မင်္ဂလာဆောင်နှင်းတော့မယ့် မင်္ဂလာမောင်နှံတို့အတွက်အရောင် ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အထောက် အကူဖြစ်စေဖို့အရောင်များရဲ့ ဂုဏ်သတ်္တိနဲ့အနက်အဓိပ္ပါယ်များကို ရှင်းလင်း ရေးသား ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာမောင်နှံသည်ရိုးသားခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်း၊ အပြစ် ကင်းခြင်း တို့နဲ့အတူဘဝတစ်သက်တာ လက်တွဲသွားနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနားများမှာသတို့သမီးတို့သည် အဖြူရောင်ကိုသာရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာအခြံအရံများကိုတော့မင်္ဂလာမောင်နှံရဲ့စိတ်ကြိုက် အရောင်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ဆင်မြန်းပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အတူဘဝတစ်လျှောက်ထွန်းလင်းမှု အလင်း ရောင်ကိုရရှိစေတယ်လို့ယုံကြည် ကြ ပါတယ်။ အဝါနုရောင် ကတော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ လန်းဆန်းခြင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ကစလို့ ရွှေရောင်ကို မင်္ဂလာအရောင်လို့လူအများ ကယုံကြည်ကြပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ စုလျားရစ်ပတ်ထိမ်းမြားခြင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုလုပ်တဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံတို့အဖို့ ရွွှေရောင်သည် အသင့်တော် ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရောင်သည် စီးပွားကောင်းခြင်း၊ ဘဝမှာထွန်းလင်းတောက်ပမှုနဲ့အတူ ရွှေ၊ ငွေ၊ ရတနာပေါများခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်း၊ အင်အားကြီးမားခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းတယ်လို့ယုံကြည်ကြ ပါတယ်။ ရွှေရောင်ပိုးဖဲအစပေါ်မှာ စိန်များ (အဖြူရောင်)၊ အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ Crystal ကျောက်များဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ထိုင်မသိမ်းများကို သတို့သမီးများလွန် စွာနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ခန်းမမှာ အလှဆင်တဲ့အခါ ပန်းနဲ့အတူ နန်းတော်ကြီးထဲမှာ မင်္ဂလာဘိတ်သိက်ပွဲကျင်းပ နေသည့် ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ ကုန်ကျ စရိတ်အားဖြင့် များစွာရှိသော်လည်း လွန်စွာကျက်သရေ မင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ ဘဝရဲ့တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်တဲ့ချိုမြိန် တဲ့ အမှတ်တရအခမ်းအနားအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ငွေရောင်ကတော့ အဖြူရောင်နဲ့အလားသဏ္ဍာန် တူပါတယ်။ အေးချမ်းခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
မြန်မာအယူမှာတော့ အနီရောင်ကို မင်္ဂလာပွဲများမှာ ရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတို့ အတွက်ကတော့ အနီရောင်သည် ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိခြင်း၊ စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးခြင်းနဲ့ ကံကောင်းခြင်း တို့ကို ပေးစွမ်းတာဖြစ်လို့ မင်္ဂလာဖိတ်စာကစလို့ မင်္ဂလာပွဲအတွက် အသုံးပြုမယ့် အသုံးအဆောင်များကို အနီရောင်ပိတ်စ၊ စက္ကူစတို့ကို မပါမဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
သတို့သမီးအများစု ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင် ဖြစ်ပါ တယ်။ ပန်းရောင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သလိုနုပျိုခြင်း၊ သာယာချမ်းမြေ့ခြင်းနဲ့ စိတ်ကြည်ကူးခြင်းကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
ပန်းသခွားရောင်ကတော့(၂၀၁၁)ခုနှစ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်နှင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသမီးလေးရဲ့မင်္ဂလာ ပွဲကစလို့လူကြိုက်များလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သတို့သမီးလေးများရဲ့အလှကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေး နိုင်တဲ့ အရောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းသခွားရောင်လို့ဆိုရာဝယ် ပန်းရောင်ဘက်သန်းတဲ့ပန်းသခွားရောင်၊ မိတ်ကပ်ရောင်သန်းတဲ့ ပန်းသခွားရောင်ဆိုပြီး အနည်းငယ်ဆီကွဲပြားသွားပါတယ်။
မင်္ဂလာအခမ်းအနားများမှာအသုံးနည်းတဲ့ အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ စမန-တနိငညါ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့ အခါ မှာတော့လိမေ်္မာ်ရောင်ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ ရှေးအယူ မရှိသူများကတော့မင်္ဂလာပွဲမှာ လိမေ်္မာ်ရောင်ကို ရွေးချယ် ဝတ်ဆင်ပြီး အခမ်းအနားမှာလည်း လိမေ်္မာ်ရောင်ကို ရွေးချယ် တတ်ပါတယ်။ လိမေ်္မာ်ရောင်သည်နုပျိုခြင်း၊ အကောင်းမြင်ခြင်း၊ သဘာဝဆန်ခြင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့အတွက် ကိုယ်စား ပြုပါ တယ်။
အနောက်တိုင်း အယူအဆမှာတော့ ခရမ်းရောင်ကို တော်ဝင်အရောင်အဖြစ် မှတ်ယူအသုံးပြုပါတယ်။ခရမ်းရောင် သည် ဘုန်းကံမြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ကတော့ သဘာဝတရားကို ချစ်မြတ်နိုးသူတို့ အတွက်ပါ။ အစိမ်းရောင်သည် အေးမြခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ဖန်တီးမှုအားကောင်းခြင်းနဲ့အတူ ငွေကြေးကံကောင်းခြင်း တို့ ကို ပေးစွမ်းတယ်လို့မှတ်ယူကြပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာ အယူအဆမှာတော့ မင်္ဂလာအခမ်းအနား အတွက်အရောင် ရွေးချယ်ရာမှာ ရှောင်ကျဉ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခေတ်မှီပြီး ရှေးရိုးအယူများကို လွန်စွာ လိုက်နာသူ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ မိမိနှစ်သက်တယ်၊ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုရင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အချို့မင်္ဂလာပွဲများ မှာ အနက်ရောင်သတို့သမီး ဂါဝန်ဝတ်ဆင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အစဉ်အလာအရ မင်္ဂလာပွဲများမှာ သုံးလေ့ရှိသော အရောင်နဲ့ ရှောင်ကျဉ်လေ့ရှိသောအရောင်များကို မင်္ဂလာဆောင်နှင်းတော့မယ့် မင်္ဂလာမောင်နှံများ အတွက် အထောက် အကူရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရိက္ခာဝပြောဓါတ်နှင့် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ခြင်း – ဇင်ယော်နီ
အောက်တိုဘာ 20, 2017 နေ့တွင်
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ရွှေတိုးနှင့် မိုးမိုးဆွေဟု ခေါ်သော ကျွန်ုပ်၏ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း လင်မယားနှစ်ဦးတို့ရောက်ရှိလာကြလေသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ၎င်းတို့အား မနောမယ လက်ဘက်ရည်ဖြင့် ဧည့်ခံရလေ၏။
လက်ဘက်ရည် သောက်ရင်း ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်အောက်မေ့ဖွယ်ရာများကို ကြည်နူးလွမ်းဆွတ် စွာဖြင့်ပြောဖြစ်ကြလေ၏။ ထို့သို့ပြောရင်း သူငယ်ချင်းရွှေတိုးက “ ဒီလို သူငယ်ချင်းရေ အခုလာရင်း ကိစ္စက ငါ့သားအကြီးကောင်ရဲ့ မင်္ဂလာကိစ္စတို်င်ပင်ချင်လို့ကွ သူတို့ချင်း နေ့နံသင့်မသင့်လည်း တွက်ပေးပါဦးကွာ . . .” ဟု ပြောရာကျွန်ုပ်က ၎င်း၏နောက်ကျောအား လက်သီးဆုပ်ဖြင့် ဖုန်းခနဲထုရင်း – “မင်းတို့ဟာကလည်း မဟုတ်သေး ပါဘူးကွာ မင်္ဂလာကိစ္စတောင် စီစဉ်နေပါပြီဆိုကာမှ နေ့နံချင်းမသင့်ဘူးဆိုပါတော့ကွာ ဘာလုပ်မလဲ . . .” ဟုမေးလိုက်လျှှင် ထိုနှစ်ဦးလည်းဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပါးစပ်ပိတ်သွားကြလေ၏။ ထိုအခါတွင်မှကျွန်ုပ်ကလည်း ပြုံး၍ “ငါ့ဆီကို လူငယ်လေးတွေ ဗေဒင်လာမေးရင်တော့ ငါဘာပြောလွှတ်လေ့ ရှိလဲဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုကြမယ့် ကိစ္စ မှာ ဗေဒင်ကိန်းခန်းတွေနဲ့ညီရင်တော့ အကောင်းဆုံးဘဲ မညီရင်လည်း ကိုယ်တစ်ကယ်ကြိုက်လို့ကတော့ ယူသာယူကြလို့ မြှောက်ပေးလိုက်တာပဲဟေ့။
အေးမသင့်တော်တဲ့သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အတွက် ဒုက္ခကြုံလာရင်လည်း ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ခံကြပေါ့ကွာ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဟေ့ ဒုက္ခကို ဈေးတွက်တွက်ကြည့် ရင်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တာကို ကိုယ်ယူတဲ့ ဒုက္ခက သက်သာတယ်ကွ။ ဆိုကြပါစို့ကွာ ကိုယ်အမှန်တကယ်ချစ်တဲ့ သူကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်မချစ်တဲ့၊ မိဘတွေ ပေးစားတဲ့သူနဲ့အိမ်ထောင်ပြုရမယ်ဆိုပါစို့၊ အဲ့ဒါဆိုရင် နံပါတ် တစ်က ချစ်သောသူနဲ့ ကွေကွင်းရမယ်။ နံပါတ် နှစ်က မချစ်မနှစ်သက်သောသူနဲ့ပေါင်းဖက်ရမယ်။ဒုက္ခက နှစ်မျိုးကွ။
အေး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုပဲ အသိုင်းဝိုင်းတွေဘာတွေ သဘောမတူတဲ့ ကြားထဲက ဗေဒင်ကိန်းခန်းတွေ ဘာတွေမကိုက်ညီတဲ့ကြားက ဇွတ်အတင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခ အနည်းနဲ့အများ ကြုံရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ချစ်သောသူနဲ့ ပေါင်းဖက်ရခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာရခြင်းကိုတော့ ခံစားရဦးမှာ . . .။
အဲ့ဒီတော့ ငါကတော့ လူငယ်တွေကို ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ရအောင်သာယူကြပေတော့။ နောက်ကိစ္စတွေကိုနောက်မှ ရှင်းကြတာပေါ့လို့မြှောက်ပေးလိုက်တာပဲဟေ့ . . .” ဟု ပြောလိုက်လျှင် ရွှေတိုးနှင့် မိုးမိုးဆွေတို့လည်း တစ်ဦးမျက်နှာ တစ်ဦးပြိုင်တူကြည့်လျက် မျက်စပစ်ကြလေ၏။ ထို့နောက်တွင်မှ မိုးမိုးဆွေက
“ အေးပါဟယ် နင်ပြောတာလည်း ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေပါတယ်။ မင်္ဂလာရက်ရွေးတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာမှ နေ့နံသင့်မသင့်တွေပါ တွက်နေလို့လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ငါတို့သား၊ နင့်တူရဲ့မင်္ဂလာရက်ကိုသာ အကောင်းဆုံးတွက်ပေးပါတော့ဟယ် . . .” ဟုပြောလေတော့၏။
ကျွန်ုပ်လည်း လူငယ်နှစ်ဦးတို့၏ မွေးခု၊ လ၊ ရက် များဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် မင်္ဂလာရက်မြတ်နှင့် အခြားလိုအပ်သည်များကို တွက်စစ်ဟောပြောပေးခဲ့ရလေ၏။ ရွှေတိုးက – “ ဟေ့ကောင်ကြီး ၊ မင်္ဂလာပွဲနေ့မှာ မင်းမလာလို့တော့မရဘူးနော် . . .” ဟုပြော၏.။ မိုးမိုးဆွေကလည်း “နင်တော်တော်အဆင်ပြေနေတာ ၊ လက်ဖွဲ့လည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် လက်ဖွဲ့ရမယ်နော် . . .” ဟုပြော၏။ ကျွန်ုပ်က “ အေး သူတို့ ဘဝခရီးလမ်းအတွက် အကောင်းဆုံး လက်ဖွဲ့ ငါယူလာခဲ့မယ်” ဟု ကတိပေးလိုက်ရလေ၏။ ဤသို့ဖြင့် မင်္ဂလာပွဲနေ့သို့ ရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်သည် ပရိုဘောက်ဟုခေါ်သောကား လေးတစ်စီးကို ငှား၍ သွားခဲ့လေ၏။
သူငယ်ချင်း ဇနီးမောင်နှံနှင့် သတို့သားသတို့သမီးတို့က ဆီးကြိုကြ၏။ ကျွန်ုပ်က လက်ဖွဲ့ခုံအနီးရှိ လူငယ်လေး များအား “ ငါ့ကို ဝိုင်းကူပေးကြပါ ကလေးတို့ရယ် . . .” ဟု အကူအညီတောင်းကာ ကားဆီသို့ ခေါ်သွားကာ ကားဆီမှ ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လာသောအခါ ရွှေတိုးနှင့် မိုးမိုးဆွေတို့သည် မျက်လုံး အပြူးသား၊ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် “ ဟေ့ကောင်ကြီး မင်းလက်ဖွဲ့တာတွေက ဘာတွေလည်းဟ . . .” ဟု မေးကြလေ၏။
ကျွန်ုပ်က ပြုံး၍ “ ငါက ဘုရားပင့်လာပေးတာကွ။ ကလေးတွေရဲ့မင်္ဂလာဦးမှာ အတိတ် နမိတ်တွေ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ အသားတော်ကရွှေရောင်၊ သင်္ကန်းတော်ကအနီရောင်၊ ပုလ္လင်တော်က အစိမ်းရောင်ခြယ်သထားတဲ့ ဝါ၊ စိမ်း၊ နီ ဘုရားတစ်ဆူ ပင့်လာပေးတာကွ . . .ပြီးတော့ ဆန်တစ်အိတ်လည်း ပါတယ်ကွာ၊ ဆယ်ပိဿာဆီပုံးတစ်ပုံးလည်းပါတယ်ကွာ . . .” ဟုပြောလိုက်လျှင် ရွှေတိုးလည်း ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်လျက် – “ အဆန်းပါလားကွ ဟု ရေရွတ်လေ၏။ မိုးမိုးဆွေ ကလည်း လူငယ်တစ်ဦး မနိုင်မနင်း ထမ်းလာသော တောင်းကြီးကို ကြည့်ရင်း . . .“ဟဲ့ အဲဒီတောင်းကြီးထဲကရော ဘာတွေလည်း ဟဲ့ . . .”ဟု တအံ့တဩမေးလေ၏။ ကျွန်ုပ်က- “ အဲဒီ့တောင်ကြီးထဲမှာက ဘူးသီး၊ ခရမ်းသီး၊ ပဲသီး၊ ရုံပတီသီး၊ အာလူး၊ ကုလားပဲ နဲ့ ငါးခြောက်တွေပါတယ် . . .” ဟု ပြောပြလိုက်ရာ၊ မိုးမိုးဆွေကလည်း ရင်ဘတ်ကို လက်ဖြင့်ဖိရင်း – “သူ လက်ဖွဲ့တာတွေကလည်း အဆန်းတွေပါလားတော် ” . . .ဟုရေရွတ်လေ၏။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်က – “ မဆန်းနဲ့ဟဲ့ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးမှာ ပူဇော်ဖို့ ဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်နိမိတ်ကောင်းလဲ . . .။ ပြီးတော့အခု ငါ လက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ ဆန်တွေနဲ့ နက်ဖြန် နံနက်စော ထမင်းချက် သီးစုံကုလားဟင်းချက်၊ ဘုရားမှာလည်း ဆွမ်းတော်ကပ်၊ သံဃာတော်တွေကိုလည်း ဆွမ်းလောင်း၊ တသက်လုံးမှာ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ရေ ရိက္ခာပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီးလှူနိုင်တန်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့နိမိတ်ကောင်းကို ယူရမယ် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ . . .” ဟုပြောပြလိုက်ရာ ရွှေတိုးနှင့် မိုးမိုးဆွေတို့လည်း မျက်နှာများ ဝင်းကနဲ ဖြစ်သွားလျက် . . .“ အေးဟယ် ကောင်းလိုက်တာနော် ငါတို့ဖြင့်စဉ်းစားတောင် မစဉ်းစားမိပါဘူး။ ကလေးတွေရဲ့မင်္ဂလာဦးမှာ နင်လက်ဖွဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေက၊ ဝမ်းသာစရာ ကောင်းလိုက်တာဟယ် . . .ဟု တစ်ဖွဖွ ပြောကြလေ၏။
မူရင်း – Susan’s Wedding Guide (Issue -15)
09 30686066, 09 96 3599968
Book Now And Save 10% on Chatrium Dream Wedding Packages
စက်တင်ဘာ 21, 2017 နေ့တွင်
Book Now And Save 10% on Chatrium Dream Wedding Packages ချက်ထရီယမ်၏ ဝါကျွတ်မေတ္တာအစီအစဉ်
Chatrium Hotel Royal lake Yangon မှာ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဖြင့် တစ်သက်တာမေ့မရနိုင်သော ပျော်ရွှင်မှု အမှတ်တရများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ချက်ထရီယမ်၏ ဝါကျွတ်မေတ္တာလက်ဆောင် စတင်လိုက်ပါပြီ။ ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်၏ အထူးမေတ္တာလက်ဆောင်(၁၀) ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးကို ရယူပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ စေ့စပ်ပွဲ၊ မော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ၊ ညစာစားပွဲနှင့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ပွဲ များအတွက်သာမက Weekdays ကြားရက်များတွင် ကျင်းပမည့် သူများအတွက်လည်း အခြားနှစ်လိုဖွယ် အထူးအခွင့်အရေးများစီစဉ်ပေးထားသောကြောင့် မင်္ဂလာရက်မြတ်ရွေးချယ်ပြီးဘိုကင်တင်နိုင်ဖို့ သတင်းကောင်း ပါးလို်က်ပါတယ်။ ယခုဝါကျွတ်မေတ္တာလက်ဆောင်အစီစဉ်ကို အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ သက်မှတ် ထားပါသဖြင့် ဖုန်း 01 544500 လိုင်းခွဲ 6214 (သို့) [email protected] သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း booking တင်နိုင်ပါသည်။
Chatrium Dream Wedding Packagers မင်္ဂလာဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလို ပါသည်။ Package အလိုက်ဈေးနှုန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
> Lily Package Kyat 20,000 per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၃ မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ)
> Lotus Package Kyat 21,000 per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၄ မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ)
> Daffodil Package Kyat 22,000 per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၅ မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ)
> Orchid Package Kyat 25,000 per pax (Hi Tea Menu)
> Jasmine Package Kyat 43,000 per pax (မြန်မာ(သို့) တရုတ်(သို့) နိုင်ငံတကာဘူဖေး)
> Tulip Package Kyat 48,000 per pax (မြန်မာ(သို့) တရုတ်(သို့) နိုင်ငံတကာဘူဖေး)
Red Rose Package Kyat 52,000 per pax (မြန်မာ(သို့) တရုတ်(သို့) အနောက်တိုင်း(သို့) နိုင်ငံတကာ ဘူဖေး)
Package အားလုံးအတွက် အနည်းဆုံးလူဦးရေ ၂၈ဝ မှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ Package များသာမက စေ့စပ်ပွဲများ၊ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားများ၊ ကလေးမွေးနေ့ပွဲများ အတွက်လည်း လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက်မီနူးနှင့် ဧည့်ခံနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပြီး ခမ်းနားထည်ဝါ လှသော Chatrium Grand Callroom တွင်လူဦးရေ ၄၀ဝ အထိ တည်ခင်းနိုင်ပြီး Nagapali Pool Garden တွင် လူဦးရေ ၇၀ဝ အထိ တည်ခင်းနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်ပရိတ်သတ်များကို အရသာကောင်းမွန် ပြည့်စုံလှသော အစားအသောက်များဖြင့် အထက်တန်းကျကျ တည်ခင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဟိုတယ်၏ Pastry Chef Mr. Somboong မှ အမြင်တင့်တယ်လှပပြီး အရသာထူးခြားကောင်းမွန်သော Cake and snack များကို တာဝန်ယူတီထွင်ပေးပြီး Luch/ Dinner နှင့် Brunch Reception တို့အတွက် Western Chef Mr. Kosol နှင့် Chinese Chef Mr. Chichtichoch တို့မှ စေတနာ အပြည့်ဖြင့် ဆန်းသစ်ထားသော မီနူးများကို အကောင်းဆုံး အရသာခံစားမှုများဖြင့် စီမံချက်ပြုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon တွင် မင်္ဂလာဆောင်သော မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် မင်္ဂလာခန်းမ အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်၊ မင်္ဂလာပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သော အခမ်းအနားပြင်ဆင်မှုများနှင့် ပန်းအလှဆင်ခြင်းများကို လက်ဖွဲ့အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မင်္ဂလာကိတ်၊ ရေခဲပန်းပုနှင့် ကားအလှဆင်ပေးခြင်း၊ နောက်ခံတေးသံသာ၊ မီးအလှပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ ကော်ဇောနီ ခန်းမတလျှောက် ခင်းပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း လက်ဆောင်ပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
Chatrium ဟိုတယ်၏ ခန်းမများသည် မင်္ဂလာဆောင်ခန်းမအနေဖြင့်သာမက မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ပွဲများ၊ ကလေးမွေးနေ့များအတွက်လည်း အထူးသင့်လျော်ပြီး ဧည့်သည်အရေအတွက်ပေါ် မူတည် ၍ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် Chatrium ဟိုတယ်တွင် မဂ်လာပွဲကျင်းပသည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နှင့် ကလေးမွေးနေ့များကို ၅ရာခိုင်နှုန်း ဈေးလျှော့ပေးမည့် အထူးအခွင့်အရေးများလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် Package အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ Chatrium Hotel ၏ Honeymoon အခန်းတွင် နံနက်စာအပါအဝင် တစ်ညတာ တည်းခိုခွင့်၊ ရေခဲပန်းပု၊ ရှန်ပိန် Fountain၊ ကားအလှဆင်ခြင်း စသည်ဖြင့် အခြားနှစ်လိုဖွယ်ရာ အထူးအခွင့်အရေးများလည်း စီစဉ်ထားရှိပေးပါသည်။
Chatrium Dream Wedding packages များနှင့် ပက်သက်၍ အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်း လိုသည်များနှင့် ဘိုကင်တင်ရန် အတွက် မခင်မြတ်သူ ဖုန်း 01 544500 လိုင်းခွဲ 6214 သို့ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Thinzar Myat [email protected], Assistant Director of Marketing Communications
Su Sandi Oo, Marketing Communication Coordinator
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon Tel: +95 1 544500, Fax +95 1 544344
Email : [email protected] Website: www.chatrium.com
Facebook : www.facebook.com/ChatriumHotelRoyalLakeYangon
PARKROYAL HOTEL ရဲ့Wedding Package တွေအကြောင်း
ဩဂုတ် 12, 2017 နေ့တွင်
ရန်ကုန်မြို့ရဲ ့နှလုံးသားဗဟိုချက်နေရာမှာတည်ရှိတဲ့ PARKROYAL Hotel မှာ ရနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့Wedding Package တွေအကြောင်းကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးဆီ Susan Wedding’s (Myanmar) က ယူဆောင်လာပါရစေ။ မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ့် မင်္ဂလာမောင်နှံတွေအတွက် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးဖြစ်ဖို့ အတွက် PARKROYAL ဟိုတယ်မှ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါတယ်။ လှပတဲ့ အခမ်းအနားပြင်ဆင်မှု၊ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ခန်းမကျယ်၊ အရသာရှိလှတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့်အတူ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများက မင်္ဂလာမောင်နှံတွေနဲ့ မင်္ဂလာပွဲလာဧည့်ပရိတ်သက်တွေအတွက် တသက်မမေ့နိုင်စရာအကြီးကျယ်ဆုံးမင်္ဂလာပွဲအဖြစ် အမြဲဂုဏ်ယူအမှတ်ရနေမှာပါ။ PARKROYAL Yangon Hotel က မင်္ဂလာမောင်နှံတွေအတွက် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ packages အမျိုးအစားစုံလင်စွာနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
PARKROYAL Hotel က ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Tea Reception Package ရဲ ့အသေးစိတ်နဲ ့ပတ်သတ်ပြီး Susan’s Wedding (Myanmar) ကို ရှင်းပြခဲ့တာတွေကတော့
• Shappire Package – မုန့် (၃)မျိုး၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ရေခဲမုန် ့
• Ruby Package – မုန့် (၄)မျိုး၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ရေခဲမုန် ့
• Diamond Package – မုန့် (၅)မျိုး(သို့) ဒင်းဆမ်း၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ရေခဲမုန့် တို့ဖြစ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်နို်င်ပါတယ်။
Lunch or Dinner Wedding packages မှာဆိုရင်တော့
• Myanmar Set Menu
• Chinese Set Menu
• Indian Set Menu
• Western Set Menu
Dim Sum Menu ဆိုပြီး အရသာရှိလှတဲ့ နေ့လည်စာ(သို့)ညစာတို့ကို မင်္ဂလာမောင်နှံစိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်တည်ခင်းနိုင်ပါတယ်။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် Backdrop ဝန်ဆောင်မှု ၊ ခန်းမတွင်း ပန်းအလှဆင်မှု၊ မင်္ဂလာမောင်နှံတွေအတွက် အကြို (သို့မဟုတ်) အပို့ မင်္ဂလာကားဝန်ဆောင်မှု၊ PARKROYAL Yangon Hotel မှာ ဘူဖေးနံနက်စာအပါ တစ်ညတာတည်းခိုခွင့်၊ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ပွဲ (သို့မဟုတ်) ကလေးမွေးနေ့ပွဲအတွက် ၂၀% Discount ခံစားခွင့်၊ မင်္ဂလာနေ့တွင် မင်္ဂလာမောင်နှံနှင့်အတူ ဧည့်သည် (၁၀)ယောက်အတွက် Club5သို့အခမဲ့ဝင်ခွင့်များရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၂၅ဝ ရှိမှသာ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုတွေကို ခံစားခွင့်ရနိုင်မှာပါလို့ စိတ်ရည်လက်ရှည်ရှင်းပြပါတယ်။ နေ့ထူးနေ့မြတ်နှင့် မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ ရွေးချယ်လိုတဲ့ မင်္ဂလာအချိန် ၊ နေ့ရက်အတိုင်းဖြစ်စေဖို့ ကြိုတင်ပြီးရက်ချိန်းရယူထားတာကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း စေတနာစကားလေးပါးလိုက်ပါသေးတယ်။ Susan’s Wedding (Myanmar) က ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် PARKROYAL Yangon Hotel ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က ၂၅ဝ ၃၈၈ (လိုင်းခွဲ-၈၁၈၉) သို့မဟုတ် [email protected] နှင့် [email protected]ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်နှင်းကြတော့မယ့် မင်္ဂလာဆောင်နှံတွေ အနေနဲ့ စိတ်ကူးထားတဲ့ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ တစ်သက်မမေ့နိုင်စရာမင်္ဂလာပွဲကို စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ နှစ်ကိုယ်တူ ဘဝအစ ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးကို ဘဝမှာပြန်တွေးလိုက်တို်င်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ရာအမှတ်တရများစွာနဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိပါစေလို့ PARKROYAL Yangon Hotel နဲ့အတူ Susan’s Wedding (Myanmar) မှ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ကြော်ငြာများထည့်သွင်းလိုပါက – ဖုန်း – ဝ၉ ၉၆၃၅ ၉၉၉ ၆၈ သို ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။
ဇူလိုင် 29, 2017 နေ့တွင်
ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေမှာ အရမ်းလှတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်လေးတွေရှိကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တစ်သက် မှာတစ်ခါသာကြုံတွေ့ရမယ့် မင်္ဂလာပွဲလေးမှာအလှဆုံးဖြစ်ချင်ကြတာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ချစ်သူနဲ့အတူတူ ပြန်ကြည့်လိုက် တဲ့အချိန်တိုင်း အမှတ်ရနေမယ့် အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ကူးချင်ကြတာပါ။ အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေက ဗီယက်နမ်မှာ Prewedding ရိုက်ကူးချင်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေအတွက် အကူအညီ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗီယက်နမ်မှာ Preweddingသွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကိုသူရထွန်းနဲ့မစိုးသီရိဖြိုးတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အမှတ်တရတွေကို Susan’s Weddings (Myanmar)ရဲ ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
သတို့သမီးလောင်းလေး မစိုးသီရိဖြိုးနဲ ့စကားစမြည်ပြောဖြစ်တာကတော့ ” အမတို့ ဗီယက်နမ်မှာ Prewedding သွားရိုက်ကူးဖြစ်တာက Facebook Page တွေမှာတွေ့တယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ကလည်း တစ်ခါမှမရောက်ဖူးသေးတာနဲ့ အလည်သွားရင်းနဲ့ရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အမတို့ Prewedding ကို ဒါနန်းမှာရိုက်ကူးခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ စရံအရင်ကြိုတောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်အမတို့ကတော့ Confirm ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဟိုရောက်တော့မှ တစ်ခါတည်း စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ အမတို့သွားခဲ့တာက ၁ဝ ရက်နေ့ကနေ ၁၃ ရက်နေ့ထိပေါ့နော်။ ၁ဝရက်နေ့ညရောက်တယ်။ ၁၁ရက် နေ့မှာ သွားတွေ့ပြီး အကျီင်္ရွေးပြီး အစမ်းဝတ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ၁၂ရက်နေ့မှာတော့ လျှောက်လည်ပြီး ၁၃ရက်နေ့မှာ ရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့တယ်။ ၁၄ရက်နေ့ကျတော့ ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်။
Prewedding အတွက်အမက အဲ့မှာရှိတဲ့ Package တွေထဲကပဲVIP ကိုယူခဲ့တယ်။ VIP Package အတွက်က Wedding Wedding Dress ၂စုံရတယ်။ ရိုးရိုး Package ကကျတော့ Wedding Dress ၃ စုံပေးတယ်။ casual ကတစ်စုံပေးတယ်။ သတို့သားလောင်းက ၂စုံ ရတယ်ပေါ့။ အမတို့ယူတဲ့ Package က ဒေါ်လာ ၇၀ဝ ပေးရတယ်။ ရိုက်တော့လည်း ကိုယ်ရိုက်ကူးချင်တဲ့နေရာကို သူတို့တွေကို ပြောပြပြီးတော့ ကားကိုလည်းသူတို့ပဲ စီစဉ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားခနဲ့ဝင်ကြေးတွေကတော့ ပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အမတို့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Studioက Tuarts Wedding Studioပါ။ ဓါတ်ပုံတွေကတော့ Raw နဲ့တစ်ခါတည်းရတယ်။ Edit လုပ်ပြီးသားပုံကတော့ ၈ဝ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၃ပတ်တော့ စောင့်ရတယ်။
တော်တော်လေးပျော်ခဲ့ရပါတယ်။ အမှတ်တရတွေကတော့ များပါတယ်။ အမတို့ Prewedding ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေက Tour Attraction နေရာတွေဆိုတော့ လူတွေအများကြီးက ဝိုင်းပြီးဂုဏ်ပြုပေးကြတာမျိုးတို့ post မလုပ်တတ်လို့ သူတို့ကအစမ်းလုပ်ပြတာတွေကို ကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ရင်းပျော်ခဲ့ရတာတို့ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ အခက်အခဲကတော့ ဘာသာစကားပေါ့။သူတို့က English သိပ်မရတဲ့အတွက် ပြောရတာအဆင်မပြေတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ကျန်တာတွေကတော့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ အမတို့က ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်စီစဉ်ပြီးသွားခဲ့တာဆိုတော့ အကုန်အကျတွေမများခဲ့ပါဘူး။ ဗီယက်နမ်က Viewလေးတွေလည်းလှတယ်။ အလည်လည်းရောက်ဖူးသွားတယ်၊ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကလည်း တန်တဲ့အတွက် ဗီယက်နမ်မှာ Prewedding သွားရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးထားတဲ့စုံတွဲတွေဆိုရင် ပေးရတာထက်ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မူရစေတယ် လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့Susan’s Weddings (Myanmar) ကို သတို့သမီးလောင်း မစိုုးသီရိဖြိုးက ပြောပြပါတယ်။
ကဲ အခုဆိုရင်တော့ ဗီယက်နမ် မှာ Prewedding ရိုက်ကူးချင်ကြတဲ့မောင်မယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုအကောင်အထည် ဖော်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တာလေးတွေ၊ ပြင်ဆင်ရမှာလေးတွေ နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေအကြောင်းကို အနည်းအကျဉ်းလောက်သိရှိနိုင် လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ဗီယက်နမ်မှာ Prewedding ရိုက်တဲ့အချိန်ကြုံတွေ့ရတဲ့ အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ လှပတဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ ကိုသူရထွန်းနဲ့မစိုးသီရိဖြိုးတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ Susan’s Weddings (Myanmar) စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေလည်း ပျော်ရွှင်စရာအမှတ်တရတွေကိုချစ်သူနဲ့ အတူတူဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Copyright © Susan’s Weddings (Myanmar) မှတင်ဆက်ပါသည်။
ဇူလိုင် 15, 2017 နေ့တွင်
မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်လို ့အတွေးတွေစတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ ့စီစဉ်စရာတွေများလွန်းတဲ့အခါမှာ စိတ်ရှုတ်ထွေးလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပဖို ့ရည်ရွယ်ပြင်ဆင်တော့မယ့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ စီစဉ်သင့်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးအများစုကတော့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့မွေးနေ ့မွေးရက်တွေနဲ ့အတူ ဗေဒင်၊ အကြားအမြင်အဆရှိတဲ့ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ပေးနိုင်သူများထံသွားပြီး နေ ့သင့်နံသင့်ဖြစ်ရဲ ့လားကစပြီး တွက်ချက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲနောက်မှာ မင်္ဂလာရက်၊ မင်္ဂလာအရောင်တွေရွေးကြတယ်။
မင်္ဂလာခန်းမ မရွေးချယ်မီ နှစ်ဘက်မိသားစုများက ဖိတ်ကြားမယ့်ဧည့်သည်စာရင်းကို အတိအကျမဟုတ်တောင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါ။ ထို့နောက် မင်္ဂလာခန်းမကို ရွေးချယ်ပါ။ သတိပြုသင့်သည်က ဧည့်သည်ဦးရေနဲ ့မင်္ဂလာခန်းမသည် လိုက်လျောညီထွေရှိဖို့ပါပဲ။ ခန့်မှန်းထားတဲ့ဧည့်သည်ထက်ပိုလာနိုင်သေးတာဖြစ်လို့ အနည်းဆုံးဧည့်သည်(၄၀)လောက်ကို အပိုတွက်ပြီးမှ ခန်းမကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပါ။ ခန်းမအနေအထားကို ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာရက်ကိုရွေးတဲ့အခါ အများအားဖြင့် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေရက်တွေကို အဓိကရွေးကြတဲ့အတွက် ဟိုတယ်ကြီးတွေနဲ့ မင်္ဂလာခန်းမတွေက ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်တာများကြပါတယ်။ အချို ့က နိုင်ငံရပ်ခြားကနေခွင့်နဲ့ပြန်လာပြီး မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ဖို့ မင်္ဂလာရက်ကိုအမျိုးမျိုးညှိနှိုင်းကြရပါတယ်။ ဟိုတယ်ခန်းမ မအားတာတွေများတဲ့အခါ စိတ်ရှုတ်စရာပါ။ အကြံလေးတစ်ခုပေးပါရစေ။ မင်္ဂလာရက်သတ်မှတ်ပေးထားရင် အဲဒီနေ ့မှာ လက်ထပ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီး ထိမ်းမြားခြင်းမင်္ဂလာပြုလိုက်တယ်ဆိုရင် စိတ်သက်သာရာရတဲ့အပြင် အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခု ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။
သတို့သမီးလောင်းတိုင်းလှချင်ကြတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ မိတ်ကပ်ပညာရှင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ထက်စောပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့သတို့သမီးလေးများရဲ ့ပြင်ဆင်ခြယ်မှုန်းမှုတွေကို လေ့လာပါ။ နိုင်ငံကျော်မိတ်ကပ်ပညာရှင်များရဲ ့မိတ်ကပ်နှင့်ဆံပင်ဖန်တီးမှုအတွက် တတ်နိုင်သလောက်အချိန်စောစော ဘွတ်ကင်တင်ရပါမယ်။
မိမိဝတ်ချင်တဲ့သတို့သမီးဝတ်စုံအရောင်သည် မိမိနဲ ့လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိအတွက် ဒီဇိုင်နာရဲ ့အကြံပေးမှုကိုရယူပါ။ သတို့သမီးလောင်းရဲ ့အခင်မင်ဆုံးမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းနဲ ့အတူတူ ဝတ်စုံအရောင်နဲ ့ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ အချို့သတို့သားလောင်းများက သတို့သမီးဝတ်စုံကို ကိုယ်တိုင်ရွေးပေးချင်တာဖြစ်လို့ ချစ်သူရွေးပေးတဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့လှနေမယ်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံလိုက်ပါ။
သာမာန်အားဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် Fancy လက်ဝတ်ရတနာများကို ငှားရမ်းဆင်မြန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ ငှားတဲ့အခါမှာ အရေအတွက်ကိုသေချာစီစစ်ငှားရမ်းပါ။ အချို ့ကတော့ လက်ဝတ်ရတနာအစစ်များကို ကိုယ်ပိုင်သော်လည်းကောင်း ဆင်မြန်းပေးမယ့်သူရှိလို့သော်လည်းကောင်း ဆင်မြန်းကြပါတယ်။ သတိပြုရမှာက တန်ဖိုးကြီးသောလက်ဝတ်ရတနာများအတွက် မိမိရဲ ့စိုးရိမ်စိတ်တွေက မျက်နှာမှာ မထင်ဟပ်စေဖို ့ပါပဲ။
Pre-wedding ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို
Pre-wedding အတွက် မိမိဝတ်ချင်တဲ့ဝတ်စုံအရေအတွက်ကို ကြိုတင်စဉ်းစားပါ။ Indoor/ Outdoor ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ရာသီဥတုသည် အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ချစ်သူသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ သိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေကို ဓါတ်ပုံမှာထည့်ရိုက်ဖြစ်ရင် တကယ့်ကို ပျော်စရာပါ။
ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းအတွက် အနုပညာရှင်များရဲ ့ဖန်တီးမှုသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူညီနိုင်ပါဘူး။ အရောင်ဖန်တီးမှုနဲ့ အနုပညာဆန်မှုကို လေ့လာပါ။ ထို့နောက် မိမိရဲ ့ခန့်မှန်းဘတ်ဂျတ်နဲ ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စမ်းစစ်ပါ။
ဖိတ်စာ နှင့် လက်ဆောင်ကမ်း
ဖိတ်စာနဲ ့လက်ဆောင်ကမ်းကိုအနည်းဆုံး ၃လကြိုတင်မှာယူပါ။ မိမိဝတ်မယ့်ဝတ်စုံအရောင်နဲ ့နီးစပ်သော (သို ့) တူညီသော အရောင်လေးတွေအဓိကထားပြီး ရွေးချယ်ပါ။
ပန်းအလှဆင်တဲ့အခါမှာ မိမိသုံးမယ့်ဘတ်ဂျတ်နဲ့ကိုက်ညီအောင် ကြိုးစားပါ။ တကယ်လို ့ဘတ်ဂျတ်က တစ်ပွဲလုံးအတွက် မလုံလောက်ဘူးဆိုရင် စင်မြင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ သင့်တော်အောင်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်မိသားစုဝင်များနဲ ့အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအတွက် အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်လို့ပါ။
တချို ့က သီချင်းသံတွေကျယ်လောင်တာကိုမနှစ်ခြိုက်တဲ့အတွက် တီးဝိုင်းကို မထည့်ချင်ကြပါဘူး။ မင်္ဂလာပွဲ တက်ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်များအတွက် အဆိုတော်များရဲ ့တေးသီချင်းများက ဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုပါ။ တေးသံကုန်ကျစရိတ်ချုံ ့ချင်တဲ့အခါမှာလည်း သီချင်းသံလေးဖွင့်ပေးထားရင်လုံလောက်ပြီလို ့မှတ်ယူကြပါတယ်။ တကယ်လို့တေးသီချင်းဖွင့်ဖို့ပဲရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံးသီချင်းအပုဒ် ၂ဝလောက်ရွေးချယ်ပြီး ဖွင့်သင့်ပါတယ်။
မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပြီး မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့်သူအများစုကတော့ လူလတ်ပိုင်းနဲ့အတွေ့အကြုံရင့် အမျိုးသားအခမ်းအနားမှူးများကို ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ စုလျားရစ်ပတ်အခမ်းအနားအတွက် အစမ်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှူး(ဘိသိက်ဆရာလို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။) က စင်မြင့်ပေါ်မှာ မင်္ဂလာမောင်နှံနဲ့အတူရှိနေမှာဖြစ်လို့ အမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်မှာ မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့။ အနောက်တိုင်းပုံစံမင်္ဂလာပွဲများမှာတော့ အခမ်းအနားမှူးကို အမျိုးသားသော်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးသော်လည်းကောင်း ကြိုက်နှစ်သလိုအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ တရုတ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားများမှာတော့ တရုတ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးအခမ်းအနားမှူးများကို ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိပြုရမှာက ပွဲမတိုင်မီ ၁ဝရက်အလိုလောက်ကတည်းက ဖိတ်စာကို အခမ်းအနားမှူးဆီရောက်အောင်ပို့ပေးပါ။ မိမိဝတ်မယ့်အရောင်ကို သေသေချာချာပြောပြပေးပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောချင်တာကတော့ မိမိရဲ ့ခန့်မှန်းမင်္ဂလာပွဲကုန်ကျစရိတ်ကို ၁၀% အပိုဆောင်းပြီး ပိုကုန်နိုင်ပါတယ်လို ့သတိပြုပါ။ မင်္ဂလာပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ မိမိအတွက်ကျန်မှာက မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့စေချင်ပါဘူး။ အထက်မှာဖော်ပြသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းဆီမှာ နားလည်တတ်ကျွမ်းသောသူများရှိပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်များရဲ ့အကြံပေးမှုများကိုနားထောင်ပြီး မိမိနှလုံးသားရဲ ့ရွေးချယ်မှုကို လက်ခံပါ။ တခါတလေမှာ ဘတ်ဂျတ်အနေအထားကြောင့် တစ်ခုခုကိုလက်လျှော့ဖို ့စဉ်းစားတဲ့အခါ တချိန်တချိန်မှာ နောင်တမရနိုင်ဘူးလားဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။ ရွှေလက်တွဲတော့မယ့် ချစ်သူများအားလုံး ပျော်ရွှင်သောမင်္ဂလာပွဲကြီးဆင်နွှဲရင်း ပြည့်စုံသောဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
အိနိ္ဒယရိုးရာဝတ်စုံများအတွက် The Diva Bollywood Couture
ဇူလိုင် 13, 2017 နေ့တွင်
UncategorizedWedding Planing Tips
လူသားတို့မည်သည် မင်္ဂလာဆောင်နှင်းကြတဲ့အခါမှာ မိမိတို့လူမျိုးရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံကို အမြတ်တနိုးဝတ်ဆင်ပြီး ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများအတိုင်း မင်္ဂလာမှုပြုလုပ်လိုကြသည်မှာ မလွှဲဧကန်ပင်။ ရိုးရာဓလေ့များအတိုင်း မင်္ဂလာမှုပြုခြင်း ဖြင့် အိမ်ထောင်ဦးမှစတင်ကာ သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်း၊ သာယာခြင်းတို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ မှတ်ယူလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာတော့ ဟိန္ဒူရိုးရာမင်္ဂလာအခမ်းအနားများအတွက် အရည်သွေးမြင့်ပြီး ခေတ်မီတဲ့ရိုးရာ ဝတ်စုံများစုဝေးရာ The Diva Bollywood Couture နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ The Diva Bollywood Couture မှာ အိနိ္ဒယရိုးရာဝတ်စုံများကို ကလေးအရွယ်မှစတင်ကာ အသက်အပိုင်းအခြားမရွေးဝတ်စုံနိုင်တဲ့ နေ့စဉ်ဝတ်များအပြင် အခမ်းအနားများမှာ တင့်တယ်လှပစွာဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စုံများအထိ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဝတ်စုံများဟာ အိနိ္ဒယနိုင်ငံရှိ ဒီဇိုင်နာများရဲ ့ဖန်တီးမှုများဖြစ်ပြီး စေ့စပ်ပွဲနဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားများမှာ ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ မင်္ဂလာမောင်နှံအတွက် ဝတ်စုံများအပြင် မိဘနှင့် မောင်နှမများအတွက်ပါ တစ်နေရာတည်းမှာ ရရှိနိုင်အောင် အိနိ္ဒယနိုင်ငံမှ ကိုယ်တိုင်မှာယူတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်စုံများနဲ ့လိုက်ဖက်ညီဖို ့လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အတူ အခြားသော ရိုးရာအဆင်တန်ဆာများကိုလည်း စုစည်းရောင်းချပေးထားပါသေးတယ်။ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းများမှာ Traditional ethic wear (အိနိ္ဒယရိုးရာဒီဇိုင်း)၊ Indian Wear (အိနိ္ဒယရိုးရိုးဒီဇိုင်း)၊ Indo Western Design (ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ အိန္ဒယရိုးရာနှင့် အနောက်တိုင်းဒီဇိုင်းကိုတွဲဖက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်း)၊ Dhoti Pant (ဒိုသီဒီဇိုင်း)၊ Anarkali (အနားကလီဒီဇိုင်း)၊ Patiala (ပန်ချာပီဝတ်စုံ)၊ Gown (ပွဲတက်ဂါဝန်)၊ Daily wear (နေ့စဉ်ဝတ်)များကို လူကြီးလူငယ်မရွေး၊ ကျားမ မရွေးဝတ်ဆင်နိုင်အောင် အရည်အသွေးပြည့်မီမှုကို တန်ဖိုးထားတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာအဆင်ပိတ်စများကို ဝယ်ဖို့နဲ့ ချုပ်လုပ်ဖို့အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘဲ The Diva Bollywood Couture ကိုသွားလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
The Diva Bollywood Couture ရဲ ့လိပ်စာလေးကိုလည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်-၂၃၅၊ အနောက်အနော်မာ(၆)လမ်း၊ သာကေတမြို ့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို ့ဖြစ်ပြီး ပျူငှာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနဲ ့စောင့်မျှော်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်များကတော့ ဝ၉-၅ဝ ၂၉၉၂၄၊ ဝ၉-၉၆၅၀၂၉၉၂၄ တို ့ဖြစ်ကြပြီး www.facebook.com/thedivayangon မှာလည်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အလှဆုံးရိုးရာဝတ်စုံများကို ဆင်မြန်းရင်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမင်္ဂလာပွဲကို ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းပို ့သလိုက်ပါတယ်နော်။
ဇွန် 24, 2017 နေ့တွင်
မင်္ဂလာပွဲကြီး အောင်ပါစေ (ရေးသူ – ဇင်ယော်နီ)
မြန်မာ့ရိုးရာ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာလက်ထပ်နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မင်္ဂလာမောင်မယ်နှစ်ဦးတို့ မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းကြသောအခါ ထိမ်းမြားနည်း နှစ်နည်းသုံးနည်း စသည်ဖြင့် မင်္ဂလာဘိတ်သိက်ဆရာတို့က ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိကြလေ၏။ များသောအားဖြင့် မင်္ဂလာရေခွက်တွင် ရွှေလက်ချသောမင်္ဂလာ၊ မင်္ဂလာပန်းကုံးလဲလှယ်သောမင်္ဂလာ၊ မင်္ဂလာလက်စွပ်လဲလှယ်သော မင်္ဂလာ၊ စုလျားရစ်ပတ်သောမင်္ဂလာတို့ဖြင့် မင်္ဂလာအမှုကိုပြုလေ့ရှိကြလေ၏ ဤနေရာတွင် အများပရိတ်သတ်တို့မှာ ထိုမင်္ဂလာအမှုတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ကို လေးနက်စွာမဆင်ခြင်တော့ဘဲ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရလေ၏။
မင်္ဂလာပန်းကုံးစွပ်သိုင်းခြင်း၊ မင်္ဂလာလက်စွပ်ဆင်မြန်းခြင်းဟူ၍ အများသူငါတို့မှတ်ယူထားကြသော အယူအဆမှာလည်း အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားစ ပြုလာနေပြီဖြစ်လေ၏။ မြန်မာရိုးရာထိမ်းမြားလက်ထပ်နည်းများတွင် အဓိပ္ပါယ်အနှစ်သာရ နက်ရှိုင်းစွာပါရှိနေလေသည်။ ထို်အနှစ်သာရတို့ကို သဘောပေါက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင် နှင်းကြမည်ဆိုပါလျှင် မင်္ဂလာမောင်မယ်တို့အတွက်ရော၊ နှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပါပို၍ ကျက်သရေတိုး ပွားစေပေးလိမ့်မည်။
(၁) မင်္ဂလာရေခွက်တွင် ရွှေလက်ချသောမင်္ဂလာ
ငွေဖလားအတွင်း၌ ရေထည့်ထားပြီး သတို့သမီး၏ လက်ပေါ်တွင် သတို့သား၏လက်က ထပ်လျှက် ထို ရေတွင်နှစ်ရသော ဘိသိက်မင်္ဂလာအစီအရင်ဖြစ်၏။ ရေ၏ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ အေးမြခြင်းသဘောကို ယူခြင်းဖြစ်၏။ ထို့အပြင် ရေကိုတားသော် အကြားမထင်ဆိုသည့်အတိုင်း ဤမောင်မယ်တို့အား မည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမျှ ခွဲခြား၍မရ၊ ထာဝရတစ်သားတည်းစည်းလုံးနေသောသဘောကိုလည်းယူခြင်းဖြစ်၏။ ထို့အပြင်ရေပေါ်တွင်အရုပ်ရေး၍ မထင်ဆိုသည့်အတိုင်း ဤမောင်မယ်တို့၏ ဘဝလမ်းခရီးတွင် မည်သည့် အတေးအမှတ်မျှ မထင်မကျန်ဘဲပကတိငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းသောနိမိတ်ကိုယူခြင်းလည်းဖြစ်လေတော့၏။
ထို့ကြောင့် မင်္ဂလာရေခွက်တွင် မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ ရွှေလက်ချမင်္ဂလာပြုလုပ်သည့်အခါ ထိုသဘော တရားတို့ကို အာရုံပြုဆုတောင်းရန် ဖြစ်ပါလေတော့၏။
ယခုအခါ မင်္ဂလာပွဲများ၌ ဂုဏ်သရေရှိပုဂိ္ဂုလ်ကြီးများက မင်္ဂလာမောင်မယ်တို့အား မင်္ဂလာအောင် ပန်းကုံးချီးမြှင့်စွပ်သိုင်းခြင်းကို အကျအနပြုလုပ်လေကြ၏။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာထိမ်းမြား မင်္ဂလာနည်းအရ အဆင့်တစ်ဆင့်ကျန်ရှိနေလေသည်။ သတို့သားက မိမိ၏လည်ပင်းမှပန်းကုံးကိုချွတ်၍ သတို့ သမီးအားစွပ်သိုင်းပေးခြင်း၊ သတို့သမီးကလည်း မိမိ၏လည်ပင်းမှ ပန်းကုံးဖြင့် သတို့သားအား ပြန်လည် စွပ်သိုင်းပေးခြင်း၊ ထိုသို့လျှင် အပြန်အလှန် ပန်းကုံးချင်းလဲလှယ်စွပ်သိုင်း ပေးမှသာလျှင် မင်္ဂလာပန်း ကုံးလဲလှယ်သော မင်္ဂလာပြီးမြောက်အောင်မြင်မည်ဖြစ်လေသည်။
သဘောအဓိပ္ပါယ်မှာ နှစ်ဖက်သော မိဘမင်းပရိတ်သတ်တို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဤမောင်နှင့် ဤမယ်တို့သည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအပြန်အလှန်ပိုင်ဆိုင်သွားကြပြီးဖြစ်သည့်အကြောင်း သက်သေပြလိုက်သည့် သဘောပင်ဖြစ်ပါ လေတော့သည်။
ယခုအခါ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပွဲများ၌ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမိဘများက မင်္ဂလာမောင်မယ်တို့အား မင်္ဂလာ လက်စွပ်ချီးမြှင့်သော အစီအစဉ်ကိုလည်း အကျအနပြုလုပ်ကြလေ၏။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် ထိုအစီအစဉ် တွင်လည်း မြန်မာ့ရိုးရာထိမ်းမြားမင်္ဂလာနည်းအရဆိုလျှင် အဆင့်တစ်ဆင့်ကျန်နေပေသေးသည်။ နှစ်ဖက် သောမိဘ၊ မင်းပရိတ်သတ်တို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် သတို့သားက မိမိ၏လက်စွပ်ကိုချွတ်၍ သတို့သမီး၏ လက်တွင်စွပ်ပေးခြင်း၊ သတို့သမီးကလည်း သူ၏လက်စွပ်ကိုချွတ်၍ သတို့သားအား အပြန်အလှန် စွပ်ပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်စွပ်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုရခြင်းဖြစ်လေသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်ပိုင်ဆိုင် ပတ်သက်သွားကြပြီဖြစ်သည့်အကြောင်း သက်သေထူသည့် သဘောပင် ဖြစ်ပါလေတော့သည်။
အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် လက်စွပ်ချင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဓိပ္ပါယ်မှာ အပြန်အလှန်လက်စွပ်စွပ် သည့်သ ဘောပင်ဖြစ်သည်။
သတို့သမီးတွင် ဆင်မြန်းထားသောပုဝါကို စုလျားဟုခေါ်လေသည်။ နှစ်ဖက်မိဘနှင့် ဂုဏ်သရေရှိ မင်းပရိတ်သတ်တို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် သတို့သမီး၏စုလျားပုဝါစဖြင့် သတို့သားသတို့သမီးနှစ်ဦးတွဲလျက် ရစ်ပတ်လိုက်ခြင်းကို စုလျားရစ်ပတ်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဟုခေါ်လေသည်။ မောင်မယ်နှစ်ဦးတို့ ယှဉ်တွဲလျက်လည် တိုင်နှစ်ခုခြုံငုံပြီး စုလျားစဖြင့် သိုင်းပေလိုက်ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဤသည်မှာလည်း မောင်မယ်တို့သည် တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်ပိုင်ဆိုင်သွားကြပြီး နှစ်ယောက်ပေါင်း တစ်ဘဝဖြစ်သွားကြပြီး နှစ်ယောက်ပေါင်း တစ်ဘဝဖြစ်သွားကြပြီဆိုသည့်သဘောအဓိပ္ပါယ်ပင် ဖြစ်လေတော့သည်။
ဤသဘောအဓိပ္ပါယ်များနှင့် အတူကျက်သရေမင်္ဂလာအတိ ပြီးပြည့်စုံသော မင်္ဂလာပွဲသဘင်များနွှဲဆင် နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း . . . . . . ။
© Susan’s Wedding Guide (Myanmar) မှ တင်ဆက်ပါသည်။
ရန်ဖက်အတွဲတွေ အေးချမ်းစေ (ရေးသူ- ဇင်ယော်နီ)
ဇွန် 4, 2017 နေ့တွင်
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ မောင်ထွန်းမောင်နှင့် မမေမေမြင့်ဆိုသူ စုံတွဲတစ်တွဲ ရောက်ရှိလာကြလေ၏။ ၎င်းတို့အတွက် မင်္ဂလာရက်ရွေးရန် ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်လည်း ၎င်းတို့၏ မွေး ခု၊ လ၊ ရက်များကိုတွက်စစ်၍ မင်္ဂလာရက်ကို ရွေးချယ်ပေးရလေ၏။ မင်္ဂလာပွဲတွင် အဓိကအသုံးပြုသင့်သော အရောင်၊ ပန်းမြတ်မာလာ၊ ဘုရားလှူရန်နှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးရန်၊ မင်္ဂလာအစားအသောက် စသည်တို့ကိုပါပြောပြရလေ၏။ ၎င်းတို့လည်း အသေအချာရေးမှတ်ကြလေ၏။
ထိုစုံတွဲသည် ငယ်စဉ်ကပင် အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ နှစ်ဖက်မိဘတို့မှာလည်းလွန်စွာ ခင်မင်ကြ လေ၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ မင်္ဂလာကိစ္စမှာလည်း ပန်းခင်းသောလမ်းပမာ ဖြောင့်ဖြူးလျက်ရှိနေလေတော့၏။ မေမေမြင့်သည် ကျွန်ုပ်ပြောပြသမျှကို ရေးမှတ်ပြီးသည့်နောက်တွင်မှ-
“ဆရာရေ တစ်ခုလောက်တော့ မေးချင်ပါတယ်။ ကိုထွန်းမောင်က စနေသား၊ သမီးက ကြာသာပတေး သမီး အဲ့ဒါမတည့်ဘူးဆို” ဟု မေးလေတော့၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်က-
“အေးလေ ဓမ္မာ၊ သောကဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရန်ဘက်တွေဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်တော့ကော အခုညည်းတို့ ဟာက မင်္ဂလာကိစ္စတွေတောင်စီစဉ်ပြီးမှပဲဟာ။ ဘာလုပ်ချင်သေးလို့တုန်း” ဟုပြန်၍ မေးလိုက်လေ၏။ မေမေ မြင့်က ပြုံးသလို၊ မဲ့သလို မရှူနိုင်မကယ်နိုင်မျက်နှာပေးဖြင့်-
“ဘာမှတော့ လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ ဆရာရယ်။ ဒါပေမဲ့ မတည့်ဘူးဆိုတော့” ဟု ဆိုကာ ဆက်ပြောစရာစကားမရှိတော့သောကြောင့် စကားကိုရပ်ထားလေ၏။ ကျွန်ုပ်က-
“ဒီလိုရှိတယ်ဟေ့။ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ ဗေဒင်ဆရာတွေဘာတွေပြောတဲ့ တည့်ခြင်းမတည့်ခြင်း တွေကို အဓိကမထားပါနဲ့။ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုဦးစားပေးပြီး ယူကြပေတော့။ ဆရာဝန်က ဒူးရင်သီးနဲ့မတည့် ဘူးလို့ ပြောတယ်ဆိုပါစို့ မနေနိုင်ရင်တော့စားပေါ့။ သတိနဲ့စားပေါ့။ ပြီးရင်တော့ ဆေးသောက်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုပဲ နေ့နံမတည့်ပါဘူးဆိုတဲ့ စုံတွဲတွေလည်း မနေနိုင်ရင်ယူကြပေါ့။ သတိနဲ့ယူပေါ့။ ပြီးရင်တော့ ယတြာဆိုတဲ့ဆေးကို သောက်ကြပေါ့” ဟုပြောလိုက်ရာ မောင်ထွန်းမောင်သည် သွားကြီးကို ဖြီး၍ရယ်နေလေ၏။ ကျွန်ုပ်က ဆက်လက်၍-
“ကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူကို ဘoမှာပေါင်းဖက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ဒုက္ခကြုံမှာပဲ၊ ချစ်သောသူနဲ့ကွေကွင်း ရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခ၊ မချစ်မနှစ်သက်သောသူနှင့် ပေါင်းဖက်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခ နှစ်မျိုးကြုံရမယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူကိုယူရရင်တော့၊ နေ့နံမတည့်ဘူးဆိုရင်တောင်၊ မတည့်တဲ့ဒုက္ခကိုတော့ကြုံမယ်။ သို့ပေမယ့် ကြိုက်တဲ့လူကိုယူရတဲ့ ချမ်းသာသုခတော့ ခံစားရမယ်။ အဲဒီတော့ဘာတွေညာတွေတွက် မနေကြပါနဲ့။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူကို ယူလိုက်ရတာက ဒုက္ခနည်းပါတယ်” ဟု ပြောပြလိုက်ရာ မေမေမြင့်သည်-
“ဟုတ်ပါ့ ဆရာရယ် ဟုတ်ပါ့” ဟုပြောရင်း ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်လျက် သဘောအကျကြီး ကျနေလေတော့၏။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်က ဆက်လက်၍-
“ ငါတို့အဘ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခပြောသွားဘူးတာရှိတယ်။ မြန်မာစကားမှာ ဒုက္ခ၊ သုက္ခဆိုတာ ရှိတယ်လေ၊ ဒုက္ခဆိုတာ ဆင်းရဲခြင်း၊ သုခဆိုတာက ချမ်းသာခြင်း။ ကားမရှိဘူးဆိုပါတော့၊ ကားမရှိတဲ့ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ ကြုံရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကားက ပျက်လို့၊ ပြဿနာဖြစ်လို့ဆိုရင် ဒုက္ခဖြစ်သွားပြန်ရော။ ချမ်းသာခြင်းသုခကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဒုက္ခကို သုက္ခလို့ ခေါ်တာဟေ့။ အခုလည်း ညည်းဆို ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ ပေါင်းဖက်ရတဲ့သုခကြောင့် ဒုက္ခကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒါတကယ့်ဒုက္ခအစစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သုက္ခပဲရောက်စရာရှိပါတယ်။ ဟယ် အဲဒီတော့ယူသာယူကြပါ။ သုက္ခတော့ ရောက်နိုင်တာပေါ့” ဟုပြောလိုက် လျှင် မောင်ထွန်းမောင်နှင့် မေမေမြင့်တို့လည်း သဘောကျစွာဖြင့် ရယ်မောနေကြပါလေတော့၏။ ထို့နောက် တွင်မှ ကျွန်ုပ်က ဆက်လက်၍
“ဒီလိုပါ။ ရှေးလူကြီးတွေက အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် ရွေးသင့်သူတွေကို ဦးဿာ၊ စိန်ပန်း၊ ဒါန်းလှ၊ ကိုရှာ ဆိုပြီး လမ်းညွှန် ပေးခဲ့ကြတယ်။
တနင်္ဂနွေနဲ့သောကြာ၊ အင်္ဂါနဲ့ကြာသပတေး၊ စနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူး၊ တနင်္လာနဲ့ရာဟုအတွဲတွေဆိုရင် အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် အထူးကောင်းတယ်ပေါ့။ အဲဒီအတွဲတွေက ဂြိုဟ်သက်ချင်းပေါင်းကြည့်လိုက်ရင် ကိုးနေဝင်းဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီအတွဲတွေထဲမှာမပါပေမယ့် တနင်္ဂနွေနဲ့ရာဟု၊ တနင်္လာနဲ့သောကြာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသာပတေး၊ အင်္ဂါနဲ့စနေအတွဲတွေဆိုရင်လည်းဂြိုဟ်သက်ချင်းပေါင်းလိုက်ရင် ကိုးနဝင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပေါင်းဖက်ကြမယ် ဆိုရင် အကောင်းဘက်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။
အေး အခုညည်းတို့စုံတွဲလို ဓမ္ဓာ၊ သောက ရန်ဘက်ကျနေတဲ့အတွဲတွေအချင်းချင်း ကြိုက်ကြလို့ မဖြစ်မနေယူကြမယ်ဆိုရင်လည်း အေးချမ်းအောင်လုပ်ယူရမှာပေါ့။
ဒါတောင် သောကအတွဲဆိုရင် ဂြိုဟ်သက်က ၂၁+ ၁၅ ဆိုတော့ ၃၆ ရတယ်။ ၃နဲ့ ၆နဲ့ ပြန်ပေါင်းရင် လည်း ကိုးနဝင်းပဲ။ အဲဒီတော့ နဝင်းဖြစ်ပြီးသားနော်။
ကဲ ဒါဖြင့် ဓမ္ဓာ၊ သောက ရန်ဘက်အတွဲတွေ အဆင်ပြေအောင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်
ဓမ္ဓာဆိုတဲ့ စနေနဲ့ကြာသာပတေးသားသမီးအတွဲတွေက ဘုရားခုနှစ်ဆူကို ပူဇော်ကန်တော့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလုပ်ရမယ်။
သောကဆိုတဲ့ သောကြာ၊ တနင်္လာအတွဲတွေက ဘုရားကိုးဆူ အလှူကုသိုလ်များများ လုပ်ရမယ်။
အင်းဝဆိုတဲ့ တနင်္ဂနွေ၊ ဗုဒ္ဓဘူးအတွဲတွေက သံဃာတော်တွေကို ပစ္စည်းလေးပါးလှူဒါန်းတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု များများလုပ်ရမယ်။
ရာဇာဆိုတဲ့ ရာဟုနဲ့အင်္ဂါအတွဲတွေကလည်း ဘုရားခုနှစ်ဆူကို ပူဇော်ကန်တော့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တွေများများ လုပ်ရမယ်။
အဲဒါဆိုရင် နေ့နံမသင့်တဲ့ သူချင်းအိမ်ထောင်ပြုကြလို့ကြုံလာနိုင်တဲ့ ဒုက္ခ၊ သုက္ခတွေကနေ လွတ်မြောက်အေးချမ်းစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ပြောပြလိုက်ရာ နေ့နံမသင့်သောသူအချင်းချင်း အိမ်ထောင်ပြုရန် ကိစ္စကို စိုးတထင့်ထင့်ဖြစ်နေကြလေသောမောင်ထွန်းမောင်းနှင့် မေမေမြင့်တို့စုံတွဲသည် တိမ်ကင်းစင်သော လပမာ မျက်နှာများ ရွှင်လန်းဝင်းပသွားကြပါလေတော့သတည်း။
၂၀၁၇ဝါကျွတ်တွင် LOTTE ဟိုတယ်သစ်ကြီးမှာ မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပဖို ့
ဇွန် 1, 2017 နေ့တွင်
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ တစ်သက်မှာတစ်ခါ တစ်ခါမှာတစ်ဘဝစာ အမှတ်တရ ဖြစ်ကျန်ရစ်စေမည့် ခမ်းနားလှပသော မင်္ဂလာပွဲကို Lotte Hotels & Resorts Yangon မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဟိုတယ်၏ မင်္ဂလာခန်းမ အပြင်အဆင်များသည် သေသပ်လှပပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် အဆင်အယင်များ၊ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဖြင့် အသုံးပြုထားသော မီးအလင်းအမှောင်စနစ်နှင့် ဟိုတယ်၏ နွေးထွေးပျူငှါသော ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် မင်္ဂလာမောင်နှံတို့၏ မင်္ဂလာယူချိန် အခါသမယကို ပိုမိုတင့်တယ် လှပစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ မင်္ဂလာပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ်များသည်လည်း လူကြီးမင်းတို့၏ မင်္ဂလာပွဲကို ဂုဏ်ယူအားကျမဆုံး ဖြစ်စေမှာမလွဲပေ။
ဧည့်သည်တော်အယောက် ၆၀ဝ မျှကို တပြိုင်နက် ဖိတ်ကြားဧည့်ခံနိုင်သော ခန်းမကြီးသည် မြင်ကွင်းကျယ် ပြူတွင်းပေါက်များ တပ်ဆင်ထားသည့် လျှောက်လမ်းနှင့် တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းထားပြီး အင်းယားကန် အလှအပရှုမြင်ကွင်းများကို အနီးကပ် မြင်တွေ့နိုင်သည့် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ တစ်ခုတည်းသော ဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ အမှတ်တရ မင်္ဂလာနေ့လေးတစ်နေ့ကို Lotte Hotels & Resorts Yangon တွင်ကျင်းပနိုင်ရန် Wedding Package များကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါသည်။
LOTTE Hotels & Resorts Yangon ရဲ့Wedding Packages များကတော့
Soulmate Package : (USD 50)
Majestic Package : (USD 60)
Eternity Package : (USD 80)
King & Queen Package : (USD 100)
Heart to Heart Package : (USD38)
မပညာ@ Sam (Assistant Sales Manager) +959448963623 / +959784433913
or e-mail; [email protected] သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါပြီ။ လိပ်စာကတော့
Ward No 28, Block No 7, ဆင်ဖြူရှင်ရိပ်သာ၊ လှိုင်မြို ့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုကို ဟန်းနီးမွန်းထွက်ခွင့်ရမယ့် Novotel Yangon Max ရဲ့Bridal Sales
မေ 24, 2017 နေ့တွင်
နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်သည် ဧည့်သည်များအတွက် ထူးခြားပြီးအကျိုးရှိမယ့်အစီအစဉ်ကောင်းများကို အစဉ်အမြဲပြုလုပ်ပေးနေကျ ဖြစ်သည့်အတိုင်း ယခုအခါမှာလည်း မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ရဲ့
“MARRY ME, UNIQUE WEDDING SALE” ဆိုတဲ့ ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တနှစ်ထက်တနှစ် ပိုမိုသာလွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ မျှော်မှန်းချက်နဲ့ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ဤအစီအစဉ်ကို
ဇွန်လ၁၅ရက်နေ့ မှ ၃ဝရက်နေ့အထိ ၂ပတ်တာသတ်မှတ်ထားပြီး နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်မှာ မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်မည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများ အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိစေမည့် ခံစားခွင့်များစွာပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ မှာ မင်္ဂလာဆောင်ရန် စဉ်းစားထားသည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများ အသေးစိတ်လာရောက်စုံစမ်းသင့်သည့် အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ဟာ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်မှစတင်၍ ဧည့်သည်များအကြားနှစ်သက်မှု အခိုင်အမာရရှိထားပြီး အထူးသဖြင့် မင်္ဂလာပွဲနေရာအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်၏ လှပခမ်းနားတဲ့ ခန်းမကြီးဟာဆိုရင် ရန်ကုန်မှာအကြီးဆုံးခန်းမများထဲမှတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ထိုခန်းမကြီးသို့လာရောက်သည့် ဧည့်သည်တော်များ အဆင်ပြေစိတ်ချမ်းမြေ့စေရန် လုံလောက်ကျယ်ဝန်းသောကားပါကင်လည်း အဆင်သင့်ထားရှိပေးထားပါတယ်။
“MARRY ME, UNIQUE WEDDING SALE” ပြုလုပ်သည့် ၂ပတ်တာကာလအတွင်း လာရောက်ဘိုကင်တင်ကြသည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများမှာ အရင်နှစ်ကမင်္ဂလာအခမ်းအနားပြပွဲမှာရရှိသည့် အကျိုးခံစားခွင့်များထက် ပိုမိုထပ်မံဆန်းသစ်ထားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ထိုခံစားခွင့်များထဲမှာပါဝင်သည့် ခံစားခွင့်တချို့ကတော့
-နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ရဲ့ DELUXE SUITE အခန်းမှာအခမဲ့တစ်ညတာနေထိုင်ခွင့်၊
-ညစာ ၁ဝယောက်စာကို နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ရဲ့ THE SQUARE စားသောက်ဆိုင် (သို့မဟုတ်) ROYAL PAVILION စားသောက်ဆိုင်မှာ စားသုံးခွင့်၊ အမှတ်တရ CANDLE LIGHT ညစာ ၂ယောက်စာကို နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ရဲ့ ၁၄ထပ်မှာတည်ရှိတဲ့ LE CELLIER မှာသုံးဆောင်ခွင့်၊
– BACHELOR ပွဲကျင်းပချင်သူတွေအတွက် ၂၀% လျော့ပေးပြီ TIME OUT SPORTS BAR မှာ ဝီစကီ ၁ လုံးအခမဲ့ရရှိခြင်း၊
– နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်ရဲ့ EXECUTIVE SUITE မှာ ၂ညအိပ် ၃ရက်အခမဲ့တည်းခိုနိုင်ခြင်း အစရှိသည့်မြောက်များစွာသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို PACKAGE အလိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မင်္ဂလာမောင်နှံများမှာ နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်မှပေးမည့် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့များထဲမှကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်မျိုးကိုလည်း ရွေးချယ်ရရှိ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့များထဲမှ အားလုံးစိတ်ဝင်စားမဲ့လက်ဖွဲ့အချို့ကတော့
– ဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ်ကိုလှပတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေဘာလီသို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း (သို်) ဗီယက်နန်က ဟိုချီမင်းမြို့သို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊
– နိုဗိုတယ်ရန်ကုန်မက်စ်မှာ စိတ်ကြိုက်ပါတီပွဲပြုလုပ်နိုင်မည့် PARTY VOUCHER စာအုပ်ရရှိခြင်း၊
– မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲမှာ အသုံးပြုရန် ဝိုင် ၂ပုလင်း (သို့မဟုတ်) ဝီစကီပုလင်း ၁ပုလင်း ကို စားပွဲဝိုင်းတိုင်းအတွက်အခမဲ့ထည့်ပေးခြင်း နှင့် များစွာသောရွေးချယ်စရာများပါဝင်တဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ကို
“MARRY ME, UNIQUE WEDDING SALE” ပြုလုပ်သည့် ၂ပတ်တာကာလအတွင်း လာရောက်ဘိုကင်တင်ကြသည့်မင်္ဂလာမောင်နှံ တိုင်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ မင်္ဂလာအကျိုးခံစားခွင့်များ နှင့် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ရရှိခြင်းအပြင် နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုကတော့ နာမည်ကြီးဥရောပ နိုင်ငံများထဲမှ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ငံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး ဟန်းနီးမွန်းအခမဲ့သွားရောက်နိုင်မည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တစ်ခုလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤခံစားခွင့်များစွာကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ၂ပတ်တာအချိန်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အတွက် အမြန်ဆုံးလာရောက်ဘိုကင်တင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
“MARRY ME, UNIQUE WEDDING SALE” အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း ဝ၉ ၂၅၁၁၈၆၀၁၄ သို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး WWW.FACEBOOK.COM/WEDDINGATNOVOTEL/ သို့ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မေးလ်ပို့လိုပါက [email protected] (OR) [email protected] သို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
၂၀၁ရခုနှစ်အတွက် ရေပန်းစားမယ့် မင်္ဂလာဝတ်စုံအရောင် (ရေးသူ – မေတန်ခူး)
ဒီဇင်ဘာ 15, 2016 နေ့တွင်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိသတို့သမီးတိုင်းရဲ ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ထဲမှာ အဖြူရောင်ကတော့ အမြဲလွှမ်းမိုးနေမှာပါ။ သို့သော်လည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ရေပန်းစားတဲ့အရောင်ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းခဲ့တဲ့ (၂၀၁၁)ခုနှစ်မှာဆိုရင် မင်းသမီးအိန္ဒြာကျော်ဇင်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ပန်းသခွားရောင်ထိုင်မသိမ်းဝတ်စုံသည် သတို့သမီးလောင်းအားလုံးရဲ ့နှလုံးသားကို တုန်လှုတ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ပန်းသခွားရောင်စစ်စစ်မှသည် ပန်းနုရောင်၊ ပန်းမိတ်ကပ်ရောင်အစရှိတဲ့ ပန်းသခွားနဲ ့ပန်းရောင်နွယ်ဝင်အရောင်တွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်လာကြပါတယ်။
၂၀၁ရ ခုနှစ်အတွက် ရေပန်းစားမယ့်အရောင်ဟာ ဘယ်အရောင်ဖြစ်မယ်လို ့သင်ထင်ပါသလဲ။
ြမန်မာတို့အတွက် မင်္ဂလာအရောင်အဖြစ်အများက လက်ခံထားတာတွေကတော့ ရွှေရောင်နဲ့ ပန်းရောင်ပါ။ ငွေရောင်နဲ ့အဖြူရောင်ကိုလည်း ထိုက်သင့်သလို လက်ခံလေ့ရှိပါတယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အမှီလိုက်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ လူငယ်များကတော့ ပန်းသခွားရောင်၊ ခရမ်းနုရောင်၊ ရွှေလိမ္မော်ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ဗေဒါရောင်တို ့ကိုနှစ်ခြိုက်ကြပါတယ်။
၂၀၁ရခုနှစ်အတွက်ရေပန်းစားမယ့်အရောင်ကတော့ ပန်းရောင်နွယ်ဝင်ထဲကပဲဖြစ်တဲ့ ROSE GOLD COLOR ပါ။ အနီရောင်ဘက်နည်းနည်းသန်းသော ပန်းရောင်လို ့ပြောလို ့ရပါတယ်။ Apple Company က rose gold ကို မိတ်ဆက်ခဲ့တာ (၂၀၁၅) ခုနှစ်မှာပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ rose gold အရောင်ကို အခြားသောကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီများကြီးများမှလည်း rose gold အရောင်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြပါတယ်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်အကုန်မှာတော့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းပညာရှင်များရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုက rose gold အရောင်ကို မျက်စေ့ကျလာကြပါတယ်။
Rose gold အရောင်ဟာ အသားအရောင်လတ်သူမှစပြီး အသားဖြူသူများအတွက် တည်ငြိမ်သောအလှကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ Rose gold အရောင်မှာလည်း အနုအရင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားပါသေးတယ်။ မိမိအသားအရောင်နဲ ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မယ့် color tone ကိုရွေးချယ်ပြီး သတို ့သမီးလေးများက ထိုင်မသိမ်းသော်လည်းကောင်း အနောက်တိုင်းဝတ်စုံသော်လည်းကောင်း ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
၂၀၁ရခုနှစ်ရဲ ့ရေပန်းစားမယ့် Rose gold အရောင်နဲ့မင်္ဂလာသတို ့သမီးလောင်းလေးများအားလုံး အလှဆုံးနေ့ရက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့susanweddings.com က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်။
အောက်တိုဘာ 4, 2016 နေ့တွင်
Susan’s Bridal Magazine ရဲ့ “ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ပျားရည်စမ်းခရီးလေး” ကဏ္ဍအတွက် ဒီတစ်ခါရွေးချယ် ဖော်ပြပေးလိုက်တာက ကိုရန်နိုင်ထွန်းနဲ့ဒေါက်တာစုမွန်လတ်တို့ရဲ့ ပျားရည်စမ်းခရီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့တို့ကိုသွားခဲ့တဲ့ ကိုရန်နိုင်ထွန်းနဲ့ဒေါက်တာစုမွန်လတ်တို့ချစ်ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာဦးပျားရည်စမ်းခရီး လေးဆီကမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေက ကြည့်သူတိုင်းရင်မှာ ကြည်နူးပြုံးပျော်သွားစေတဲ့အပြင် စနစ်တကျမှတ်တမ်းထားခဲ့တဲ့ ပျားရည်စမ်းခရီးမှတ်တမ်းအချက်အလက်လေးတွေကလည်း မင်္ဂလာဆောင်ပြီးလို့ အလားတူပျားရည်စမ်းခရီးသွားလိုသူ မောင်နှံအသစ်များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာမို့ ထပ်ဆင့်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပျားရည်စမ်းခရီးမှတ်တမ်းလေး ကိုတော့ဒေါက်တာစုမွန်လတ်ကိုယ်တိုင် မှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်းနီးမွန်းအတွက် ၂လလောက်ကြိုပြီး လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နဂိုကတည်းက ဟန်းနီးမွန်းအတွက် ပဲရစ်ကို သွားချင်ခဲ့တာမို့၊ မရရအောင်သွားမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (တကယ်တော့ သူတို့ဆီမှာ ” ပဲရစ်” ကို ” ပါရီ” လို့ပဲ အသံထွက်ကြတာ။)
ဟန်းနီးမွန်းခရီးကို မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ သွားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Visa Feeက ယူရို၆ဝလောက်ပေးရပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ နှစ်ပတ်အလိုရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ ပြင်သစ်သံရုံးမှာ Schengren Visa လျှောက်ပါတယ်။ Working Day ၅ရက်အကြာ ပြန်ချိန်းပါတယ်။ လိုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေက ဒီလင့်ခ်မှာ ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ http://www.ambafrance-mm.org/article497 ပါ။
Agent မလိုပါဘူး။ အွန်လိုင်းကနေ Appointment ယူထားပြီး ကိုယ်တိုင်သွားလျှောက်လိုက်လို့ ရပါတယ်။
လေယာဉ်လက်မှတ်အတွက်ကတော့ ဘယ်လေကြောင်းနဲ့ပဲသွားသွား Transit ဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာဦးညကြီး မှာ လေယာဉ်အကြာကြီးမစီးချင်တာနဲ့ပဲ Vietnam မှာ ၃-၄ရက် ဝင်လည်လိုက်မယ်ဆိုပြီး Vietnam Airlines နဲ့ပဲ ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Online Official Website ကနေပဲ Multiple Destination Tickets ဝယ်လိုက်ပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့ (၁ .ရ .၂၀၁၆မှ ၄ .ရ .၂၀၁၆ထိ)
ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့ ညဘက် ဟနွိုင်းမြို့ကို ရောက်ပါတယ်။ Hotel Check in ဝင်၊ Dinner စားပြီး အေးဆေးနားလိုက်ပါ တယ်။ ဟိုတယ်က Mai Charming Spa Hotel မှာ တည်းတာပါ။ တစ်ညကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂ဝကျပါတယ်။ ညီမကတော့ booking.comကနေ Bookingလုပ်တော့ ဟန်နီးမွန်းဆိုတာသူတို့ကိုကြိုပြောထားပါတယ်။ ကြိုပြောထားတော့ Free Room Upgrade နဲ့ Room Decoration လေးလည်း လုပ်ပေးပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၂ရက်နေ့ကိုတော့ ဟနွိုင်းမှာပဲ လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ သွားချင်တဲ့ Attractionတွေကို Trip Advisorကနေရှာ၊ Google Map မှာ Offline Map Save လုပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ပြီးပဲသွားလိုက်ပါတယ်။
ဟနွိုင်းမှာက လည်စရာသိပ်မရှိတာရယ်၊ ဟန်းနီးမွန်းဆိုတော့ Halong Bay မှာ အေးဆေးနေချင်တာရယ်ကြောင့် ၃ရက်နေ့နဲ့ ၄ရက်နေ့ကို ၁ညအိပ်Overnight Cruise နဲ့ သွားလိုက်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ကပဲ Booking လုပ်ပါတယ်။
နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် လမ်းမှာတင် တစ်ကြောကို ၃ နာရီလောက်ကြာမှာဆိုတော့ ဟန်းနီးမွန်း ခရီးထွက်မယ့်စုံတွဲတွေအတွက်တော့ Overnight နေဖို့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။ Cruise သွားတဲ့နေရာ ပိုစုံသလို၊ တခြား Tour Activity တွေလည်း ပါပါတယ်။ Kayaking, Visiting to Surprised Cave စတာတွေပါပါတယ်။ ကျွေးတဲ့ အစားအသောက် ကလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Aclass Cruise Companyက Stella Cruiseနဲ့ သွားတာပါ။ အဖျော်ယမကာကလွဲပြီး အစားအစာ၊ အကြိုအပို့ ၊ Deluxeအခန်းနဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်ကိုမှ တစ်ဦးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၃ဝနှုန်းပဲ ကျသင့် ခဲ့ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၄ရက်နေ့ ညနေလောက် ဟိုတယ်ပြန်ရောက်၊ ခဏနားပြီး လေယာဉ်နဲ့ ပဲရစ်ကို ဆက်သွားပါတယ်။ ဟနွိုင်းကနေ Direct Flight နဲ့ ၁၂နာရီကြာလောက် လေယာဉ်စီးလိုက်ရပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့ (၅ .ရ .၂၀၁၆ မှ ၁ဝ .ရ .၂၀၁၆ ထိ)
ပဲရစ်မြို့မှာ ၅ရက်နေခဲ့ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရန်ကုန် Tour တွေဆို ပဲရစ်မှာ ၁ရက်၊၂ရက်ပဲနေပြီး Europe အနှံ့ သွားတာပါ။ ညီမတို့ကတော့ အဲလို Rush ဖြစ်တာကို မကြိုက်တာရယ်၊ Parisian life ကို ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အရသာလေးလည်း ရချင်တာရယ်ကြောင့် ၅ညတာ နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။10th District မှာရှိတဲ့ Hotel Kyriad Paris Canal Saint Martin မှာ တည်း ပါတယ်။ ၅ညကို City Tax အပါအဝင် ၄၆၂ယူရို ကျပါတယ်။
Paris Metro နဲ့ ဘတ်စကားတွေက နေရာတိုင်းလိုလိုကို ရောက်ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ “ Navigo Decouverte” ဆိုတဲ့ Transport Card ကို RER Metro Station မှာ ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ ၂၆ယူရို ဝန်းကျင်ကျပါတယ်။ Passport Photo အသေးလေး ကပ်ပေးရလို့ ရန်ကုန်ကနေ တစ်ခါတည်း ယူလာခဲ့ပါတယ်။ ဟိုမှာရိုက်လည်းရပါတယ်။ ၅ယူရိုဆိုတော့ ဈေးကြီးလို့ပါ။ သူက လေဆိပ်ကနေ မြို့ထဲကို အသွားအပြန်ရော၊ ရှိသမျှ Public Transport;” Metro, Bus, RER” အကုန် Cover ဖြစ်ပါတယ်။ စားဖို့သောက်ဖို့ကျတော့ ကြုံတဲ့နေရာမှာ ကြုံသလိုဝင်စားပါတယ်။ Lunch နဲ့ Dinner မှာ တစ်နပ်နပ်ကို ဖြစ်သလိုစားပြီး ကျန်တဲ့တစ်နပ်ကိုတော့ စားသောက်ဆိုင်မှာ သေချာကျကျနနစားပါတယ်။ အစားသောက်က ဈေးအရမ်းကြီးပါတယ်။ တစ်နေ့ကို စားတဲ့ဆိုင်ပေါ် မူတည်ပြီး ယူရို၅ဝကနေ ၆ဝလောက် ကုန်ကျမယ်လို့ မှန်းဆရပါတယ်။
Transport System က အရမ်းကောင်းပြီး အချိန်လည်းမှန်တော့ ပဲရစ်မြို့ထဲက သွားချင်တဲ့ နာမည်ကြီးနေရာ အတော်များများကိုMetro နဲ့ရော Bus နဲ့ပါ သွားခဲ့ပါတယ်။ တချို့ ပြတိုက်လက်မှတ်တွေကို Online က ကြိုဝယ်ရင် အကြာကြီး တန်းမစီရပါဘူး။ အဲဒီထဲကမှ အထင်ကရနေရာတွေကတော့ Paris Effiel Tower, Arc de triomphe, Champs Elysees, Louvre Museum, Bridges Spanning Seine River Banks (including Pont de arts (aka lovebridge), Canal Saint Martin, Notre Dame Cathedral, Pantheon, Luxembourg Gardens, Père Lachaise Cemetry (Largest Cemetry in Paris) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက် ကိုတော့ သီးသန့်အချိန်ယူပြီး တစ်နာရီလောက်ဝေးတဲ့ Disney Land Paris ကို သွားဖြစ်ပါတယ်။ Disney Park ရော၊ Walt Disney Studioရောကို ၄၁ယူရိုနဲ့ Online ကနေဝယ်ပြီး Print ထုတ်သွားလိုက်ပါတယ်။ မနက်(၁၀)နာရီ ဖွင့်ချိန်ကစလို့ ည(၁၁း၃၀)ပိတ်ချိန်ထိ နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရက်မှာ Versailles က Palace သွားမယ် စဉ်းစားထားပေမယ့်၊ နှစ်ယောက်လုံး အရမ်းပင်ပန်းနေတာနဲ့ မသွားဖြစ်ပါဘူး။ အနီးက Printemps ဆိုတဲ့ Shopping Mall မှာပဲ ဈေးဝယ်၊ ညဘက် လမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ၁ဝရက်နေ့ကျတော့ အပြန် ဟိုချီမင်းမှာ တစ်ရက် လေဆိပ်နားက First Hotel မှာဝင်နားပြီး နောက်နေ့မနက် ရန်ကုန်ပြန်လာပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၂ရက်အတွက် ၂ယောက်စာကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂၅၀ဝ လောက်ကုန်ပါတယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ခ တစ်ဦးကို ၉၂၆ဒေါ်လာဆိုတာ ထည့်မတွက်ထားပါဘူး။ ဒါတောင် ညီမတို့က နည်းနည်းချွေတာပြီး Shopping လည်း သိပ်မထွက်လို့ပါ။ ညီမတို့လိုု ပဲရစ်ကို တစ်ခါမှမရောက်ဖူးပါဘဲ ဟန်းနီးမွန်းသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီခရီးစဉ်မှတ်တမ်းလေးက အသုံးဝင်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ မင်္ဂလာမောင်နှံတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်သာယာသော ဟန်းနီးမွန်း ခရီးလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ဥယျာဉ်အပြင်အဆင်နှင့် ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ် မင်္ဂလာပွဲလေး
ချိုမြိန်တဲ့အမှတ်တရပေါင်းများစွာ ထင်ကျန်နေတဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲလေးကတော့ ဒေါက်တာလွင်မောင်နဲ့ မနှင်းဝေလွင် တို့ရဲ့ ကြည်နူးစရာ မင်္ဂလာအခမ်းအနားလေးပါ။ ထာဝရစိုပြေလန်းဆန်းနေမယ့်အချစ်တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစိမ်းရောင် Garden Theme လေးကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာပွဲမှာ အစိမ်းရောင်အနုနဲ့အရင့်တွေကို ရောယှက်မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတို့သမီးလေးရဲ့လှပကျော့ရှင်းတဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့အတူ အရံလေးများရဲ့ဝတ်စုံများကိုပါ ဒီဇိုင်နာစန္ဒီလင်းနိုင်က ဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အရံလေးများရဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းများကိုလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကွဲပြားအောင် ဖန်တီးပေးထားပြီး ဦးခေါင်းမှာ တပ်ဆင်ဖို့ Hair Pieceကိုပါ ဝတ်စုံဒီဇိုင်နာကပဲ တီထွင်ပေးထားတာပါ။ မိတ်ကပ်နှင့်ဆံပင်ကိုတော့ မေဦးက အလှဆုံးဖြစ်အောင်တာဝန်ယူထားပြီး မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံကတော့ Love Diary ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့ ခမ်းနားတဲ့ အပြင်အဆင်ကတော့ S&S (Events & Floral)မှဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပွဲကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် Romantic Wedding Planner Groupက တာဝန်ယူစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုလုံးကို အစိမ်းရောင်လေးတွေ လွှမ်းစေချင်တာကတော့ သတို့သမီးရဲ့ စိတ်ကူးလေးပါ။ နောက်ပြီး မင်္ဂလာပွဲမှာ ထူးခြားတာလေးက မင်္ဂလာအချိန်ရောက်လို့ ရှေ့တော်ပြေးက ဦးဆောင်ပြီး ပွဲထွက်လာတဲ့အခါမှာ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး ဘယ်တော့များ ထွက်လာမလဲဆိုတာကို ပရိသတ်ကြီးက ငေးမောစောင့်စားရတာပါ။ Here comes the Bride သီချင်းလေးကို တယောဆရာများက တီးခတ်ပေးလိုက်စဉ်မှာပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့စုံတွဲ(၃)တွဲက ပန်းကြဲရင်း Couple Dance လေးနဲ့ပါဖျော်ဖြေရင်းထွက်လာပြီး အဲဒီနောက်ကမှ မင်္ဂလာမောင်နှံက ကျော့ရှင်းလှပစွာတစ်လှမ်းချင်းလှမ်းလာတာဖြစ်တာမို့ အရမ်းကိုကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းလေးပါ။ ပန်းကြဲနဲ့အကတွဲဖက်ထားတဲ့ စိတ်ကူးဆန်းဆန်းလေးကို ဧည့်ပရိသတ်တွေကလည်း နှစ်ခြိုက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မင်္ဂလာမောင်နှံစုံတွဲက လျှောက်လမ်းရဲ့တဝက်ကျော်ထိရောက်သွားချိန်မှာတော့ တယော ဆရာများက သီချင်းရဲ့ Tempoကိုမြှင့်ပြီး တီးခတ်ပေးလိုက်တာကြောင့် ပိုပြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးသွားစေပါတယ်။ စင်မြင့်ပေါ်ရောက်ချိန်မှာတော့ အင်မတန်လှပတဲ့ မင်္ဂလာစင်မြင့်ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်နဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ရဲ့ပီတိအပြုံးတွေက သိပ်ကိုလိုက်ဖက်လို့နေပါတော့တယ်။ သဘာဝအစိမ်းရောင်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုထဲ ရောက်နေသွားသလိုဖြစ်အောင် မင်္ဂလာစင်မြင့်ကြီးထက်မှာ အစိမ်းရောင်တွေနဲ့သဘာဝဆန်ဆန်ဖန်တီးပြင်ဆင်ပေးထားတာမို့ ရှေ့ကရပ်နေတဲ့ အဖြူရောင်သတို့သမီးလေးရဲ့အလှကို ပိုပြီးပေါ်လွင်အောင် ပံ့ပိုးပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ သဘာဝဥယျာဉ်ကြီးကို ခန်းမထဲထိ အရောက်သယ်ဆောင်ပေးလိုက်သလိုမျိုး အံ့အားသင့်ဖွယ်ဖန်တီးထားတဲ့ အခမ်းအနားအပြင်အဆင်လေးကို မြင်သူတိုင်း ငေးမောမင်သက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အင်မတန်ခမ်းနားလှပတဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး နှစ်ဘက်သောမိသားစုတို့လည်း မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများ ပျော်ရွှင်စွာရိုက်ကူးရင်း မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာ အတူဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါက်တာလွင်မောင်နဲ့ မနှင်းဝေလွင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးက ကြည်နူးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး ချစ်ခြင်းတွေလွှမ်းခြုံထားတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေး ဖြစ်ခဲ့တာမို့ Susan’s Bridal Magazineကနေ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာညစာ စားပွဲလေး
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို နှစ်ဖက်ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းတွေရှေ့ ခမ်းခမ်းနားနား ထည်ထည်ဝါဝါ ဖြစ်စေဖို့ မင်္ဂလာမောင်နှံတွေအနေနဲ့ အလေးအနက် ပြုလုပ်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မင်္ဂလာညစ ာစားပွဲလေး ကိုတော့ အခင်မင် အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ပျော်စရာကောင်းအောင် ပြုလုပ်ချင်ကြတာ မင်္ဂလာမောင်နှံတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒပါပဲ။ Kandawgyi Palace Hotel ရဲ့ Pool Side မှာ ကျင်းပသွား ခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ထက်ဇော် နဲ့ မဖြူယမင်းသူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာညစာ စားပွဲလေးကလည်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိ ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာညချမ်း အချိန်အခါလေး ဖြစ်ခဲ့တာမို့ Susan’s Bridal Magazine က ခုလိုသွားရောက် မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q: အရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲလေးကို ဘယ်လိုစိတ်ကူးတွေနဲ့ စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲကို ၃လလောက် အလိုမှာမှ စတင်စီစဉ်ဖြစ်တာပါ။ အချိန်နဲ့ရက် စီစဉ်ပြီးသွားတော့အသိ MC တွေဖြစ်တဲ့ ကိုဆန်းထွဋ်နဲ့ မဇင်မင်းတို့ဆီသွားတွေ့ပြီး တိုင်ပင်ကြည့်ကြပါတယ်။ ပထမတစ်ခေါက် ပွဲထွက်တဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ပေးတဲ့ Ideaအတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပွဲထွက်လျှောက်လမ်း ဘေးကနေ Party Popper လေးတွေ ဖောက်ပေးဖို့ စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယအခေါက်ပွဲထွက်ကိုတော့ အမှတ်တရတစ်ခုခု ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး သတို့သမီးနဲ့တိုင်ပင်တော့ နှစ်ယောက်လုံးက သီချင်းဆိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေဆိုတော့ သီချင်းဆိုပြီး ပွဲထွက်ဖို့ စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစက တော့ Studio သွားပြီး ကိုယ်ဆိုထားတာကို Record လုပ်ထားပြီး ပွဲထွက်ရင် Playback ပြန်ဖွင့်ပြီး ပွဲထွက်ဖို့ လောက်ပဲ စဉ်းစားခဲ့ပေမယ် The Four Band (ဂီတမိတ်)နဲ့ တွေ့တော့ အမှတ်တရလေး ဖြစ်အောင် Live လေးဆိုပြီးထွက်ဖို့ အကြံပေးလာတာနဲ့ Live ဆိုပြီး ပွဲထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q: ညစာစားပွဲမှာ အမှတ်တရဖြစ်နေတဲ့အရာလေးက ဘာဖြစ်မလဲ။
A: အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ Dinner မတိုင်ခင်နေ့ကမှ သတို့သမီး စဉ်းစားဖြစ်တဲ့ Idea လေးပါ။ အဲဒါကတော့ သတို့သားနဲ့သတို့သမီး သီချင်းဆိုပြီး Stage ပေါ်ရောက်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတက် လာပြီး သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့နဲ့အတူ မမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ သီချင်းမျိုးနဲ့ဟာသ ဆန်ဆန် ကကြတာပါ။ “ I Fine Thank You Love You” ဆိုတဲ့ ထိုင်းအချစ်ဟာသဇာတ်ကားလေးထဲက သီချင်းနဲ့အကလေးပါ။ တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်စရာညလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Idea ကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့ အချိန်တစ်ညပဲ ရှိတာမို့သူငယ်ချင်းတွေကိုညတွင်းချင်းခေါ်ပြီး အကတိုက်ခဲ့ရတာကလည်း အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရ လေးပါပဲ။
Q: မင်္ဂလာညစာစားပွဲမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေကရော ဘယ်သူ့လက်ရာလေးတွေလဲ။
A: မင်္ဂလာဝတ်စုံတွေကတော့ သတို့သမီးဝတ်စုံက Silk & Style ဖြစ်ပြီး သတို့သားဝတ်စုံကတော့ York Bespoke ဖြစ်ပါတယ်။
Q: မိတ်ကပ်ပညာရှင်နဲ့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းအတွက် Photographer ကရော ဘယ်သူတွေပါလဲ။
A: မိတ်ကပ်ပညာရှင်ကတော့ မေဦးဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာညစာစားပွဲရဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံပညာရှင်ကတော့ ကိုလင်းထွန်း (Life Photography)ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Q: လှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီညစာစားပွဲလေးအတွက် အခမ်းအနားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်း သိပါရစေ။
A: ဒီပွဲလေးအတွက် အခမ်းအနားပန်းအလှဆင်ဖို့ကိုတော့ S&S (Events & Floral Service) ကို အပ်ခဲ့တာပါ။
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းလှတဲ့ ဒီမင်္ဂလာညစာစားပွဲလေး၏ ခံစားချက်အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးတဲ့ ကိုကျော်ထက်ဇော်နဲ့ မဖြူယမင်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံကို Susan’s Bridal Magazine ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။
ကြည်နူးစရာကောင်းလှတဲ့ ကမ်းခြေက မင်္ဂလာပွဲလေး
အချစ်အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲက အချိုမြိန်ဆုံးစိတ်ကူးတွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့ ကိုပြည့်ဖြိုးနဲ့မခိုင်မွန်ဝါတို့ရဲ့ ကြည်နူးစရာကောင်းလှတဲ့ ကမ်းခြေကမင်္ဂလာပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေ အမျိုးမျိုးလုပ်ကြပေမယ့် ကမ်းခြေမှာကျင်းပတဲ့မင်္ဂလာပွဲမျိုးကတော့ ခပ်ရှားရှားပါပဲ။ ကဗျာဆန်ဆန်ချိုမြိန်လှပတဲ့ Beach Wedding လေးမှာ ကိုပြည့်ဖြိုးနဲ့မခိုင်မွန်ဝါတို့ ချစ်ဇနီးမောင်နှံ တူနှစ်ကိုယ် ယှဉ်တွဲလို့ ပြုံးပျော်ကြည်နူးနေကြတဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး အပျော်တွေတောင် ကူးစက်လာသလိုပါပဲ။ ဟန်ဆောင်မှုတွေမပါဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်း လှတဲ့ ဒီBeach Wedding လေးအကြောင်းကို သတို့သမီးမခိုင်မွန်ဝါနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ခုလိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
A: ၂၀၁၂ခုနှစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခရီးသွားတုန်းက BOB Hotel ရဲ့ Fishermen Bar နေရာကိုစတွေ့ကတည်းက စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်းက ရည်းစားဘဝပဲရှိသေးတာဆိုတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မပြောဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် ခင်ပွန်းလောင်း Proposal လုပ်ကတည်းက Beach Wedding လုပ်ချင်တယ်။ BOB က Fishermen Bar မှာ လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး နှစ်ယောက်လုံးတပြိုင်တည်း တိုင်ပင်စရာတောင်မလိုဘဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ BOB ရဲ့Fishermen Bar က ခိုင်မွန်တို့ရဲ့ Love at First Sight ပေါ့။
A: လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြီး တစ်နှစ်လောက်နေမှ စပြီးစီစဉ်ခဲ့တာ။ Wedding Dress နဲ့ Prewedding Photographyက အချိန်အကြာဆုံး ယူရတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဝတ်စုံရှိပေမယ့် Photography မကြိုက်မချင်း အချိန်ပေးပြီး ခိုင်မွန်ကိုရှာခဲ့တာပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ အဲဒီလောက်မကြာပါဘူး။ Hotel Booking နဲ့ Guest List ကိုတော့ RSVP Confirm ဖြစ်မှဘဲ လှုပ်ရှားလို့ရတာမို့ပါ။
Q: မင်္ဂလာပွဲအတွက် Make Up Artist & Hair Stylist ကရော…?
A: Make Up ကို Phyo Day By Day ညီမလေးဖြိုးပြည့်စုံထွန်းက ခိုင်မွန်တို့ငယ်သူငယ်ချင်းရဲ့ ဇနီးဆိုတော့ ဖြိုးက Bridal Make Up မလုပ်ပေမယ့်လည်း ခိုင်မွန်အတွက်လုပ်ပေးပါဆိုပြီး ပူဆာခဲ့တာ။ ဖြိုးရဲ့ Talent က ခိုင်မွန်လို သာမန်ရုပ်ရည်နဲ့လူတောင် အရမ်းလှသွားတာ။ Photo တွေ ပြန်ကြည့်တိုင်း ချီကျူးလို့မဆုံးဘူး။ ဆံပင်အတွက်ကိုတော့ ဝေယံကို ရန်ကုန်ကနေခေါ်လာတာ။ ခိုင်မွန်က ဂျီးများတော့ အမျိုးမျိုးစမ်းပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ မငြိုမငြင်လုပ်ပေးတာ။
Q: Wedding Dress ရွေးဖြစ်ခဲ့ပုံလေးပြောပေးပါဦး။
A: Labelle Couture Singepore ဝတ်စုံကို ရန်ကုန်ထိအောင်ယူလာတာ။ ကိုယ်တိုင်းနဲ့ချုပ်ခိုင်းတာထက် သူတို့ရှိတဲ့ဝတ်စုံက ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်။ ခိုင်မွန်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ကြည့်ပြီးရွေးလို့ရမယ်ဆိုတော့လေ။ On rack ကိုပဲရွေးလိုက်တာ။ ခိုင်မွန်ကပိန်တော့ Alternationကို သေချာလုပ်ပေးတယ်။ ဝတ်စုံ၂စုံ ရွေးဖို့ကိုတောင် အနည်းဆုံး (၁၅)စုံလောက်ပေးပြီး ဝတ်ကြည့်စေပါတယ်။ Service လဲကောင်း၊ Collection လဲကောင်းပါတယ်။
Q: ပန်းအပြင်အဆင်အတွက်ရော ဘယ်လိုစီစဉ်ခဲလဲ။
A: ပန်းအသင်းက အဒေါ်က ခိုင်မွန်တို့ကိုချစ်လွန်းလို့ လက်ဖွဲ့အနေနဲ့ ပန်းတွေကို ရန်ကုန်ကနေသယ်လာပြီး လုပ်ပေးခဲ့တာ။
Q: အခန်းအနားမှူးက ဘယ်သူလဲ။
A: ခိုင်မွန်တို့ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက အခန်းအနားမှုးပါ။ သူက ခိုင်မွန်တို့အကြောင်း အကုန်သိ၊ စကားလည်းပြောတတ်၊ အားလုံးကိုလည်း သိတဲ့သူပေါ့။
Q: Photography အတွက် ဘယ်သူ့ကို ရွေးဖြစ်ခဲ့လဲ။
A: Kingsmen က ကိုထူးပြည့်စုံပါ။ အစကမသိပေမဲ့ စနေနေ့မနက် ငွေဆောင်ရောက်လာကတည်းက သူအထုတ်ချပြီး ခိုင်မွန်တို့ ပြင်ဆင်နေတာကိုလိုက်ရိုက်။ Wedding Photographyက အရမ်းကိုခက်ခဲပေမယ့် ဘယ်သူမှ Miss Out ဖြစ်မသွားအောင် Capture လုပ်ပေးလို့ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။
Q: Videography အတွက် ဘယ်လိုစီစဉ်ဖြစ်ခဲ့လဲ။
A: မင်္ဂလာဆောင်ကိုလာမယ့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ Green Box Creative Agency က CEOs တွေလည်း ပါပါတယ်။ သူတို့က Wedding Service တွေ မလုပ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ Green Box Team အရည်အချင်းကို သိတော့ သူတို့ကို ရိုက်ပေးပါ။ Something Creative ကိုဖြိုးက Documentary ကိုရိုက်ရင် ရိုက်မယ်ပြောတော့ အရမ်းကိုအဆင်ပြေသွားတာ။ ခိုင်မွန်တို့ကလဲ လူတွေကို ဦးနှောက်လိုက်စားနေတာ။ ပုံမှန် shots တွေဆို မကြိုက်တာနဲ့ အတော်ဘဲဖြစ်သွားတာ။
Q: မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပက်သတ်ပြီး အမှတ်တရအဖြစ်အပျက်လေးရော ရှိခဲ့လား။
A: အမှတ်တရတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ မင်္ဂလာဆောင်ကFeb20th ဆိုတော့ Fed14th ငွေဆောင်ကိုရောက်၊ Venue အတွက် Preparation တွေ၊ Hotel Room ကအစ ကိုယ်တိုင် Hotel နဲ့ ပြင်ဆင်၊ နောက်ဆုံးမီးကြိုးနဲ့ ပန်းကအစ အရမ်းဗျာများနေတာ။ ပွဲမစခင် နှစ်နာရီလောက်ထိ ခိုင်မွန်နေပူအောက်မှာ မျက်နှာသုတ်ပဝါ ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး ပြေးနေတုန်း။ နောက်ဆုံး Make Up ပြင်နေရင်း ဓာတ်ပုံဆရာကိုထူးပြည့်စုံက “ညီမလေးစီးမယ့်ဖိနပ်ကဘယ်မှာလဲ”လို့မေးတော့ ခိုင်မွန်က“ဖိနပ်မပါဘဲ လမ်းလျှောက် မှာ”လို့တောင်ပြောလိုက်သေးတယ်။ အချိန်တန်တော့ Hotel က Buggy နဲ့Bell Boy မောင်လေးက လာခေါ်တော့ အပြေးအလွှားတက်လိုက်ပြီး လမ်းလျှောက်တဲ့အထိတောင် Hotel ကပေးတဲ့ ဂျပန်ဖိနပ်ကို ချွတ်ဖို့သတိလုံးဝမရတာ။ လှေကားဆင်းတော့ အားလုံးက ဝိုင်းရယ်ကြရော။ ခိုင်မွန်ရဲ့အဖြစ်က အရမ်းကို ရယ်ရတာ။ အလွဲပေမယ့်လည်း အမှတ်တရအလွဲလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ခုလိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းလှတဲ့ Beach Wedding လေးရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကိုပြည့်စုံနဲ့ မခိုင်မွန်ဝါတို့ကို Susan’s Bridal Magazineက အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါ တယ်။ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူ ဖြောင့်ဖြူးသာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့လည်း တောင်းဆုပြုလိုက်ပါ တယ်။
ဓါတ်ပုံဆရာများနှင့် မင်္ဂလာပွဲက ဖုန်းကင်မရာများ
အောက်တိုဘာ 1, 2016 နေ့တွင်
မင်္ဂလာပွဲတွေမှာ တက်ရောက်ချီးမြှင့်လာကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များက အလှဆုံးသတို့သမီးနဲ့အပျော်ဆုံး ဖြစ်နေတဲ့သတို့သားရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်လိုလေ့ရှိကြပါ တယ်။ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာမောင်နှံပွဲထွက်လာတဲ့အခါမှာ စင်မြင့်သွားရာလျှောက်လမ်းတလျှောက်မှာ နေရာယူကာ ပါလာတဲ့ဖုန်းကင်မရာလေးတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကို ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ရင်းနဲ့မင်္ဂလာမောင်နှံကို ဂုဏ်ပြုစကားဆိုကြတာပါ။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့ ပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့ မေတ္တာဆုတောင်းစကားတွေအတွက် မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ် စေမယ်ဆိုတဲ့ စေတနာတွေနဲ့ပါ။
ကဲ …. ပြဿနာက ဒီမှာ စပါပြီ။
တကယ့်ကို မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ ဖြစ်သွားလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာလေးပါ။
ဓါတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကလည်း နှစ်ခါပြန်ရိုက်လို့မရတဲ့ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံတွေကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ နည်းပါးလှတဲ့ ပွဲထွက်ချိန်လေးအတွင်းမှာ ရိုက်ကူးပေးရပါတယ်။ သတို့သမီးရဲ ့လှပတဲ့အပြုံး၊ သတို့သားရဲ့ပီတိမျက်နှာ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ ့ဂုဏ်ပြုအနမ်း အစရှိတဲ့ ပျော်စရာ၊ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့က ဓါတ်ပုံဆရာများနဲ ့ဗီဒီယိုဆရာများရဲ့ကြီးမားတဲ့တာဝန်တစ်ရပ်ပါ။ စင်မြင့်ပေါ်သွားတဲ့ လျှောက်လမ်းတလျှောက် အလှပဆုံးလျှောက်လှမ်းလာတဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက် မိနစ်အနည်းငယ် သာ အချိန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကလည်း စနစ်တကျနေရာယူကာ ရှုထောင့်စုံအောင်ရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။ သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့ ပွဲထွက်လမ်းလျှောက်လာရော ဧည့်သည်တော်များကလည်း ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့နဲ့အပြိုင် မှတ်တမ်းတင်ကြတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခလုတ်တိုက်မိကုန် ကြပါတော့တယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးသူများရှိသလို အချို ့က Tablet တွေနဲ့ ရိုက်ကူးသူများလည်း ရှိပါတယ်။ ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ပုံရိပ်တွေထဲမှာလည်း လူကွယ်ပြီး မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံတို့ ပေါ်လွင်မှုမရှိတော့တာတွေလည်း ကြုံရဖူးပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း အခမ်းအနားများမှာ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေ၊ Tablet တွေနဲ ့ရိုက်ကူးခြင်းကို ပွဲမစတင်မီကတည်းက အခမ်းအနားမှူးက ကြိုတင်သတိပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဧည့်ပရိသတ်များ အားလုံးကလည်း ဒီအတွက်နားလည်မှုပေးကြပါတယ်။
ဧည့်ပရိသတ်တွေကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ မင်္ဂလာပွဲတွေမှာ အမြဲဖြစ်နေတဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်လေးတွေကို နည်းနိုင်သမျှနည်းပါးအောင် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်လေး လုပ်ကြတဲ့အခါ ပိုပြီးလှပချောမွေ့တဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးဖြစ်စေမှာပါ။
မင်္ဂလာမောင်နှံရဲ့ ချိုမြိန်လှပတဲ့အမှတ်တရအချိန်လေးကို ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်လိုတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်ကြီး ကလည်း မိမိရဲ့ထိုင်ခုံနေရာများကနေ ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းများနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် မင်္ဂလာမောင်နှံ အတွက် အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ဓါတ်ပုံဆရာများက မှတ်တမ်းတင်ဖို့ များစွာအကူအညီပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ ထိုင်ခုံမှာထိုင်ရင်း ကိုယ်ပိုင်လက်ကိုင်ဖုန်းများနဲ့ရိုက်ကူးနေခြင်းကလည်း ဓါတ်ပုံဆရာများရဲ့မှတ်တမ်းများထဲက အရေးပါတဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်ပရိသတ်အပေါင်းရဲ့ ကြွရောက်ချီးမြှင့်မှုက မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံတို့အတွက် တန်ဖိုးဖြတ်မရနိုင်သလို ပွဲရှင်မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ရဲ့ တူနှစ်ကိုယ်ဘဝ ခရီးအစမှာ သာယာလှပဖို့ကိုလည်း ဧည့်ပရိသတ်တွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလေးက အရေးပါ တာမို့ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဒီကဏ္ဍလေးကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
– Advertising available (Pls contact 09-30686066)
လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ ့ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ မင်္ဂလာပွဲများရဲ ့ယဉ်ကျေးမှု သည်လည်း ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာသလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်။
ခတ်မီတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ မအားလပ်တာတွေများလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကို သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရပ်ဝေးရပ်နီးက ဆွေမျိုးတွေနဲ့အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို “SAVE THE DATE” ဆိုပြီး မင်္ဂလာရက်ကို အသိပေးလာကြပါတယ်။ သို့မှသာ ရပ်ဝေးက ဆွေမျိုးတွေအတွက် မင်္ဂလာပွဲတက်ဖို့စီစဉ်နိုင်မယ်။ အလုပ်များသူတွေလည်း ခရီးသွားခြင်းနဲ့ အချို့ သောအရေးကြီးကိစ္စလေးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ်။ ဒါဟာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် အချို ့သောစုံတွဲများက တော့ မင်္ဂလာပွဲရက်ကို လျှို ့ဝှက်ထားချင်တာဖြစ်လို့ Save The Date အဆင့်ကို ကျော်လွှားသွားကြပါတယ်။
ခေတ်သစ် မင်္ဂလာပွဲဖိတ်နည်း မင်္ဂလာပွဲအတွက် လုပ်စရာတွေက များလွန်းလှပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ကားလမ်းတွေပိတ်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာဖိတ်စာဝေရတာ အခက်အခဲများစွာရှိကြပါတယ်။ လူငယ်အချင်းချင်းနားလည်ပေးပြီးတော့ ဖိတ်စာကို Facebook messenger (သို ့မဟုတ်) Viber ကနေ လွယ်လင့်တကူပို ့လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Facebookပေါ်မှာပဲ Event တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မင်္ဂလာပွဲတက်ရောက်အားပေးမယ့် ခန် ့မှန်းလူဦးရေကိုလည်း သိနိုင်ပြီပေါ့။
ဧည့်ပရိသတ်တို့က ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ ့မင်္ဂလာပွဲမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့အမှတ်တရအချိန်လေးကို လူမှုကွန်ယက်မှာတင်ရင်း ဂုဏ်ပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ ့အမှတ်တရလေးပုံရိပ်လေးတွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းရှာလို ့လွယ်ကူအောင် Hash Tag (#) ဖန်တီးပါ။ ချစ်သူနှစ်ဦးစလုံးရဲ ့နာမည် ပါအောင်တော့ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ – #AungSandiLove , #CrisMileyWedding လိုစာသားမျိုးတွေရွေးချယ်ပါ။ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်အားပေးမယ့် ဧည့်ပရိသတ်တို့ ထင်သာမြင်သာ သိစေဖို့ အစောကတည်းက ကြေညာပေးထားပါ။ သို့မဟုတ် မင်္ဂလာပွဲရဲ့မြင်သာမယ့်နေရာတစ်ခုမှာ ဆိုင်းဘုတ်အသေး လေးတစ်ခုနဲ ့ရေးပေးထားပါ။
ဖိတ်စာမှာ RSVP လို့ ရေးထားလား
အချို ့သောမင်္ဂလာပွဲတွေက မိသားစုဝင်တွေနဲ ့အင်မတန်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ ဖိတ်ကြားတာပါ။ ဒါကြောင့် ဖိတ်စာမှာ RSVP ဆိုပြီး ဆက်သွယ်ရမယ့် နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေ ရေးပေးထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ မင်္ဂလာပွဲကိုလာမယ့် ခန့်မှန်းလူဦးရေကို သိချင်တာဖြစ်လို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးဖို့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိတက်ရောက်ချီးမြှင့်မယ်ဆိုရင် မိမိတစ်ယောက်တည်းလား (ဒါမှမဟုတ်) အဖော်တစ်ယောက်အတူလိုက်ပါအုံးမလားဆိုတာကိုပါ တိတိကျကျအကြောင်းကြားပေးရင်း မင်္ဂလာမောင်နှံကို တဖက်တလမ်းက ကူညီပေးလိုက်ပါ။
Dress Code ဆိုရင်
အများအားဖြင့် ခေတ်မီအနောက်တိုင်းဆန်တဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ မင်္ဂလာမောင်နှံက သူတို့နှစ်သက်တဲ့အရောင်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) နှစ်ခုကိုသုံးပြီး မင်္ဂလာပွဲရဲ့ Theme အနေနဲ့ ဖန်တီးချင်တာပါ။ မင်္ဂလာပွဲရဲ့အပြင်အဆင်တွေ၊ မီးအရောင်တွေနဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံဆင်မြန်းမယ့် ဝတ်စုံကိုပါ Theme တစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး ဖိတ်စာမှာ ရေးထားတဲ့ Dress Code အတိုင်း ဝတ်ပေးလိုက်ရင် မင်္ဂလာမောင်နှံရဲ့ပွဲလေးက ပိုပြီး အသက်ဝင်သွားတာပေါ့။ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံတွေ ရတဲ့အခါမှာ အင်မတန်ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်။